သရပါ: ပေါ်လစ်ဗျူရိုအတွင်း စစ်ပွဲ ။ အခန်း ၁ (နိုင်ငံတော် အကျဉ်းသား)
တရုတ်ပြည် နိုင်ငံရေးလောကအတွင်းမှ ဆန်.ကျင်ဖက်အင်အားစုများ တစ်ဖက်နှင့်တစ်ဖက် မည်သို.မည်ပုံ နိုင်ငံရေးအရ လှည့်စားလှုပ်ရှားကြသနည်း ဆိုသည်မှာ ကာလကြာရှည်စွာပင် ပဟေဠိတစ်ခုဖြစ်နေခဲ့သည် ။ ကွန်မြုနစ်ပါတီ၏ အာဏာနှင့် မော်စီတုန်းအစဉ်အလာတို.ကို ကာကွယ်လိုသည့် တော်လှန်ရေးအစောင့်တပ်များ၏ မက်ခီယာဗယ်လီယန် လျှို.ဝှက်ကြံစည်မှုများကို ကျောက်က ဖွင့်ချခဲ့သည် ။
ကွန်မြူနစ်ပါတီ၏ လစ်ဘရယ်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သည့် ဟူယောင်ဘန်းကို ဖယ်ရှားရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည့် ခေါင်းဆောင်ကြီးတိန်.ရှောင်ပင်း၏ ၁၉၈၇ ခုနှစ်အတွင်းက ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလည်း ကျောက်က မီးမောင်းထိုးပြထားသည် ။ တရုတ်လူ.အဖွဲ.အစည်းအတွင်း ကျယ်ပြန်.ကြီးထွားလာသည့် လစ်ဘရယ်ရေစီးကြောင်းကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန် တိန်.၏ သတိပေးချက်ကို ဟူသည် ထူးထူးခြားခြားပင် အလေးအနက်မထားခဲ့ပေ ။ သို.သော် နောက်ဆုံး၌ ဟောင်ကောင် သတင်းထောက်တစ်ဦးနှင့် ပြုလုပ်ခဲ့သည့် ဟူ၏ အင်တာဗျူးမှာ ဆိုးရွားသည့် အမှားတစ်ခုဖြစ်သွားခဲ့သည် ။ အင်တာဗျူး၌ သူက တိန်.ကို အငြိမ်းစားယူရန် လောဆော်နေသည့်သဖွယ်ဖြစ်ခဲ့သည် ။ ကျောက်သည် ပါတီခေါင်းဆောင်အဖြစ် တာဝန်ယူခဲ့ပြီး ရှေးယိုးစွဲဝါဒီများ၏ အမျက်ဒေါသကို ဖြေဖျောက်နိုင်ရန် ကြိုးစားခဲ့သည် ။ ကျောက်က စီးပွါးရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုကို ကာကွယ်ရန် ကြိုးပမ်းအားထုတ်ရာ၌ ပါတီဝါရင့်များက လစ်ဘရယ်ဝါဒ ဆန်.ကျင်ရေးကန်ပိန်းကို၁ ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည် ။
၁၉၈၇ ခုနှစ်အတွင်း၌ ဟူယောင်ဘန်းကို အတင်းအကျပ် နှုတ်ထွက်စေရန် ဖိအားပေးခဲ့သည် ။ ဤကိစ္စနှင့်ပက်သက်၍ ပြောဆိုမှု အများအပြားရှိခဲ့သည် ။ တစ်ခုမှာ တိန်.သည် ပါတီဝါရင့်များ၏ ဖိအားအရ ကျောက်ကိုကာကွယ်ရန်အတွက် ဟူကိုစွန်.လွှတ်ခဲ့သည်ဟုဖြစ်သည် ။ ဤအချက် မှန်ကန်သည်ဟု ကျွန်တော်မထင်ပါ ။ တိန်.၏ ရှေ.မှောက်၌ ဟူကို စွပ်စွဲမှုများ ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် တိန်.နှင့်ဟူ၏ကြား၌ ပြဿနာများ ကြီးထွားလာစေရန် ဆွပေးနေသူများ အမှန်တကယ်ပင်ရှိနေပါသည် ။ သို.သော်လည်း ၎င်းမှာ အဓိကအကြောင်းရင်း ဖြစ်လိမ့်မည်ဟု ကျွန်တော်မထင်ပါ ။
တိန်.ရှောင်ပင်းက ဟူယောင်ဘန်းနှင့် လမ်းခွဲခဲ့ခြင်း၏ အကြောင်းမှာ သူ.အနေဖြင့် လှည့်စားခံခဲ့ရခြင်းကြောင့် သို.မဟုတ် ပြင်ပဖိအားများအရ အပေးအယူလုပ်ခဲ့ရခြင်းကြောင့်မဟုတ်ပါ ။ ဟူနှင့်ပက်သက်သည့် တိန်.၏သဘောထား တဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲသွားခဲ့ပြီး နောက်ဆုံး၌ ဟူအပေါ် ယုံကြည်မှု မရှိတော့ခြင်းကြောင့်သာဖြစ်သည် ။
ပညာတတ်များအတွင်း၌ လစ်ဘရယ်အယူအဆများ ကျယ်ပြန်.ထွန်းကားလာခြင်းနှင့် ပက်သက်၍ ယောင်ဘန်းသည် သူနှင့်ပို၍ သဘောထားကွဲလွဲလာသည်ဟု ၁၉၈၀ မှ ၁၉၈၆ ခုနှစ်များအတွင်း တိန်.ကယူဆလာသည် ။ သူတို.နှစ်ဦးကြားရှိ သဘောထားကွဲလွဲမှုမှာ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ပို၍ကျယ်ပြန်.လာသည် ။ ၁၉၈၀ ခုနှစ်မှစ၍ လစ်ဘရယ်အယူအဆများ ကျယ်ပြန်.လာခြင်းကို ရှုတ်ချဖို. သို.မဟုတ် ၎င်းကိုဆန်.ကျင်သည့် လှုပ်ရှားမှုများ ပြုလုပ်ဖို. တိန်.ထွက်ပေါ်လာစဉ်တိုင်း၌ အမှန်တကယ် သူလုပ်နေသည့်အလုပ်မှာ (ဩဇာတိက္ကမကြီးမားသည့် လက်ဝဲခေါင်းဆောင်) ဟူကျားမူနှင့် တိန်.လီကျန်တို.ထံမှ သူရရှိနေသည့် အစီရင်ခံစာများကို တုံ.ပြန်နေခြင်းသာဖြစ်သည် ။ သို.သော်လည်း တကယ်တမ်း၌ တိန်.နှင့်ယောင်ဘန်းတို.သည် ဤကိစ္စနှင့်ပက်သက်၍ ရိုးသားစွာ သဘောထားကွဲလွဲနေကြခြင်းသာဖြစ်သည် ။ သူတို.နှစ်ဦးကြား၌ ပြဿနာကို မီးမွှေးပေးမည့်သူများ ရှိမနေစေကာမူ သူတို.၏ ပဋိပက္ခမှာ ပို၍ကြီးမားလေးနက်လာမည်သာဖြစ်သည် ။ အဆုံးသတ်ရလာဒ်ကို ရှောင်လွှဲ၍ ရနိုင်စရာအကြောင်းမရှိပေ ။
အောက်ပါတို.မှာ ထိုနှစ်ကာလများအတွင်း ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့် ဖြစ်ရပ်များဖြစ်သည် ။
၁၉၇၉ ခုနှစ်အတွင်း၌ အခြခံမူလေးချက် အတည်ပြုချမှတ်ရေးအတွက် သဘောတရားရေးရာ တွေ.ဆုံဆွေးနွေးပွဲသို. တိန်.က အစီရင်ခံစာတစ်စောင် ပေးပို.ခဲ့သည်၂ ။ ထိုစဉ်မှစ၍ လစ်ဘရယ်ရေးရာနှင့် ပက်သက်၍ တိန်.နှင့်ဟူတို.သည် မတူကွဲပြားသည့် အမြင်များရှိနေကြောင်း ရှင်းလင်းသွားသည် ။
နှစ်ကာလများ ကုန်လွန်လာသည်နှင့်အမျှ သူတို.၏ သဘောထားကွဲမှုမှာ ပို၍ထင်ရှားလာပြီး သူတို.၏ ရပ်တည်ချက်များမှာလည်း ပို၍ဝေးကွာလာခဲ့သည် ။ ၁၉၈၁ခုနှစ် ဇူလိုင်လအတွင်း၌ သဘောတရားရေးရာ မျက်နှာစာ၃ကို “လျှော့ရိလျှော့ရဲနိုင်လှပြီး အားနည်းသည်”ဟု တိန်.ရှောင်ပင်းက စွပ်စွဲပြီး ထိုကိစ္စကို ထုတ်ဖော်ပြောကြားလာခဲ့သည် ။ ၁၉၈၃ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလတွင်ကျင်းပသည့် ၁၂ကြိမ်မြောက် ဗဟိုကော်မတီ ဒုတိယအကြိမ်စုံညီအစည်းအဝေး၌ သဘောတရားရေးရာမျက်နှာစာမှ အဖွဲ.အစည်းများသည် မည်သည့် “စိတ်ဓာတ်ရေးရာ ညစ်နွမ်းမှုမျိုးတွင်မျှ ပါဝင်ပက်သက်ခြင်း မရှိသင့်ကြောင်း” တိန်.က ပြောကြားခဲ့သည် ။ ပညာတတ်များအတွင်း လစ်ဘရယ်ရေစီးကြောင်း အရှိန်ရကျယ်ပြန်.လာသည် ၊ ဤနယ်ပယ်သည် ဟူယောင်ဘန်း၏ စီမံခန်.ခွဲမှုအောက်တွင်ရှိသောကြောင့် ထိုကိစ္စအတွက် ယောင်ဘန်းတွင် တာဝန်ရှိသည်ဟု ခံစားရသောကြောင့် သူကဤသို.ပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည် ။
ဟူယောင်ဘန်းသည် ဤကဲ့သို.သော မေးခွန်းမျိုးကို သူ.ကိုယ်သူလည်း မေးခွန်းမထုတ်ခဲ့ဖူးသလို ဤကိစ္စ၏ သဘောသဘာဝတို.ကို တိန်.ထံသို.လည်း အစီရင်မခံခဲ့ဖူးပေ ။ ထိုသို.ဖြစ်ရမည့်အစား တိန်.သည် ဤအကြောင်းအရာတို.ကို သူ.ဘာသာသူ ခံစားသိရှိခြင်း သို.မဟုတ် ဟူကျားမူနှင့် တိန်.လီကျန်တို.ထံမှ ကြားသိရခြင်းသာဖြစ်သည် ။ သို.ဖြစ်သောကြောင့် သူ.ကိုဖယ်ထုတ်ထားသည်ဟု သူခံစားရခြင်းဖြစ်သည် ။ ထို.ကြောင့်ပင် ဟူအပေါ် ကျေနပ်မှုမရှိခြင်းဖြစ်သည် ။
ဤနေရာတွင် “စိတ်ဓာတ်ရေးရာညစ်နွမ်းမှု ဆန်.ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှု၎”အကြောင်းကို ကျွန်တော်အထူးပြောလိုသည် ။ ဤကိစ္စနှင့်ပက်သက်၍ ဟူယောင်ဘန်းကိုင်တွယ်ပုံကြောင့် သူတို.ကြားက ပဋိပက္ခကို ပို၍ဆိုးရွားစေသည်ဟု ကျွန်တော်ထင်သည် ။ ဤကိစ္စက သူတို.နှစ်ဦးကြားက နောက်ဆုံးခွါပြဲမှုတွင် အဓိကကျသော အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်သည် ။
၁၂ကြိမ်မြောက် ဗဟိုကော်မတီ ဒုတိယအကြိမ် စုံညီအစည်းအဝေးအပြီးတွင် တိန်.၏ “စိတ်ဓာတ်ရေးရာညစ်နွမ်းမှု ဆန်.ကျင်ရေးကန်ပိန်း”ကို တစ်နိုင်ငံလုံးအနှံ. ဖြန်.ချိလိုက်သည် ။ ယဉ်ကျေးမှု ၊ အတွေးအခေါ်နှင့် စီးပွါးရေးနယ်ပယ်တို.တွင်သာမက ပြည်သူလူထု၏ နေ.စဉ်လူနေမှုဘဝသို.တိုင် “လက်ဝဲစွန်း” အတွေးအခေါ်များ ပြန်လည်ပေါ်ထွက်လာသည် ။ အမျိုးသမီးရဲဘော်များ၏ ဆံပင်ပုံစံနှင့်ဖက်ရှင်တို.သည်ပင်လျှင် စိတ်ဓာတ်ရေးရာညစ်နွမ်းမှု ဆန်.ကျင်ရေးကန်ပိန်း၏ ထိန်းချုပ်မှုအောက်သို. ကျရောက်ကုန်ပြီး နောက်ထပ် ယဉ်ကျေးမှုတော်လှန်ရေး တစ်ခုသည် မိုးကုပ်စက်ဝိုင်းတွင် ဝဲနေသယောင် ထင်ရပေသည် ။ တရုတ်ပြည်အနှံ.အပြားမှ ပညာတတ်များနှင့် နိုင်ငံတကာ သတင်းသမားများ၏ ပြင်းထန်သည့် တုံ.ပြန်ဝေဖန်သံများ ပေါ်ထွက်လာသည် ။
ထိုနှစ်ဆောင်းတွင်း၌ ကျွန်တော် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသို. ခရီးထွက်ရာတွင် ကျွန်တော်ရောက်လေရာရာ နေရာတိုင်း၌ ထိုအကြောင်းနှင့်ပက်သက်၍ လူအများအပြား၏ မေးခွန်းများကို ရင်ဆိုင်ရပြီး သူတို.၏ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများကို ဖြေဖျောက်ပေးခဲ့ရသည် ။ ကန်ပိန်း၏ အရှိန်အဟုန်မှာ စီးပွါးရေးမူဝါဒများနှင့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကို ခြိမ်းခြောက်နိုင်လောက်အောင်အထိ အားကောင်းလှသည် ။
စီးပွါးရေးနှောင့်နှေးရပ်တန်.မှု မဖြစ်စေရန်အတွက် ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ် ဝမ်လီနှင့် ကျွန်တော်တို.က စိတ်ဓာတ်ရေးရာညစ်နွမ်းမှု ဆန်.ကျင်ရေးကန်ပိန်းသည် စီးပွါးရေးနှင့် စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍများတွင် မသက်ရောက်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ကြေငြာခဲ့ရသည် ။ ကန်ပိန်းလှုပ်ရှားမှုသည် လူနေမှုအလေ့အထများအပေါ်တွင် သက်ရောက်မှုမရှိစေသင့်ကြောင်း ကျွန်တော်တို.က အဆိုပြုခဲ့သည် ။ ဤအချက်က အခြေအနေအရပ်ရပ်ကို အေးဆေးသွားစေအောင် အကျိုးသက်ရောက်ခဲ့သည် ။ လစ်ဘရယ်ဝါဒ ဆန်.ကျင်ရေး လှုပ်ရှားမှုသည် လူထုအကြားတွင် လက်ခံမှုမရှိသောကြောင့် အကယ်၍ စီးပွါးရေး ၊ စိုက်ပျိုးရေးနှင့် သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာနယ်ပယ်များသည်လည်း “ကင်းလွတ်ခွင့်မရှိ”ပါက လှုပ်ရှားမှုသည် အတွေးအခေါ်ရေးရာနှင့် ယဉ်ကျေးမှုနယ်ပယ်များတွင်ပါ အရှိန်လျှော့ကျသွားနိုင်သည် ။ တိန်.ကိုယ်တိုင်သည်ပင်လျှင် အခြေအနေအရပ်ရပ်နှင့်ပက်သက်၍ စိုးရိမ်ပူပန်လာပြီး ဤအကြောင်းကို ထုတ်ဖော်ပြောကြားလာသည် ။ ထို.ကြောင့် စိတ်ဓာတ်ရေးရာညစ်နွမ်းမှု ဆန်.ကျင်ရေးကန်ပိန်းသည် အချိန်ကာလသိပ်မကြာမြင့်လိုက်ပေ ။
ယောင်ဘန်းသည် ကန်ပိန်းကို အမြဲပင် သံသယဝင်ခဲ့၍ ပညာတတ်တို.၏ အမျက်ဒေါသနှင့် နိုင်ငံတကာ၏ အယူအဆများအပေါ် ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများကို လျှော့ချပေးလိုဟန်ရှိသည် ။ ၁၉၈၄ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်း ရှန်ဟိုင်းပါတီအကြီးအကဲများထံ သွားရောက်တွေ.ဆုံသည့် ခရီးစဉ်နှင့် နောက်ထပ်တဖန် ဂျပန်ဧည့်သည်များကို တွေ.ဆုံရာတို.၌ “စိတ်ဓာတ်ရေးရာ ညစ်နွမ်းမှု ရှင်းလင်းရေး”ဟူသည့် စကားရပ်သည် မသင့်တော်ကြောင်း သူကပြောကြားခဲ့သည် ။ ဤစကားစုသည် ကန်ပိန်းလှုပ်ရှားမှုတွင် အလွန်အကျွံ လုပ်ရပ်များသို. ဦးတည်စေနိုင်ကြောင်း ၊ ထိုစကားစုကို နောက်ထပ် သုံးစွဲတော့မည်မဟုတ်ကြောင်း သူကပြောကြားခဲ့သည် ။
ဤကိစ္စမှာ အလွန်ပင်အကဲဆတ်၍ အတိမ်းအစောင်းမခံသော အကြောင်းအရာဖြစ်သည် ။ သူပြောသည့် စကားလုံးများ ပျံ.နှံ.သွားသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက် ပြည်သူလူထု အထူးသဖြင့် ပညာတတ်လူတန်းစားအတွင်း၌ စိတ်ဓာတ်ရေးရာညစ်နွမ်းမှု ရှင်းလင်းရေး ကန်ပိန်းသည် မှားယွင်းကြောင်း ထင်မြင်ယူဆသွားကြသည် ။ “စိတ်ဓာတ်ရေးရာညစ်နွမ်းမှု ဆန်.ကျင်ရေး”လို. ရှောင်ပင်းက နဂိုမူလက သုံးစွဲခဲ့တာပါ ၊ ဒါပေမယ့် သတင်းဋ္ဌါနတွေက “စိတ်ဓာတ်ရေးရာညစ်နွမ်းမှု ရှင်းလင်းရေး”လို. လိုရာစွဲပြီး ခေါ်ဝေါ်သုံးစွဲခဲ့ကြတယ် ၊ အဲဒါကြောင့် အလွန်အကျွံတွေ ဖြစ်ကုန်တာပဲ”ဟု ယောင်ဘန်းက အထူးအလေးပေးပြောကြားခဲ့သည် ။ တစ်နည်းအားဖြင့်ဆိုပါက တိန်.ရှောင်ပင်း မမှားယွင်းခဲ့ပဲ သူ၏စကားတို.ကို လွဲမှားစွာ အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့ခြင်းသာဖြစ်သည်ဟု ဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည် ။ တကယ်တမ်း၌ တိန်.ရှောင်ပင်း၏ မိန်.ခွန်းကို အခြခံ၍ ကန်ပိန်းပြုလုပ်ခဲ့ခင်းဖြစ်သည် ။ ထို.ကြောင့် သတင်းစာတို.၌ ပုံနှိပ်ဖော်ပြရာတွင်ဖြစ်စေ ၊ ခေါင်းဆောင်တို.၏ မိန်.ခွန်းများ၌ ပြောကြားဖော်ပြရာ၌ဖြစ်စေ “ရှင်းလင်းရေး”ဟူသည့် စကားလုံးကို အကြိမ်များစွာ သုံးစွဲခဲ့ကြသည် ။ တိန်.၏ ပြောကြားချက်ကို မူတည်၍ ကန်ပိန်းကို ဆင်နွှဲခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း လူတိုင်းသိကြသည် ။ ထို.ကြောင့် ယောင်ဘန်း၏ ရှင်းလင်းချက်တို.က တိန်.တွင်တာဝန်ရှိကြောင်း ပြည်သူတို.၏ ယူဆချက်ကို မလွှဲပြောင်းနိုင်ခဲ့ပေ ။
ယောင်ဘန်း၏ ဤကဲ့သို.သော ပြောကြားချက်များနှင့်ပက်သက်၍ တိန်.သည် ကျေနပ်မှုမရှိခဲ့ပေ ။ “စိတ်ဓာတ်ရေးရာညစ်နွမ်းမှု ဆန်.ကျင်ရေး”ဟုပင်ဆိုဆို “လစ်ဘရယ်ဝါဒ ဆန်.ကျင်ရေး”ဟုပဲခေါ်ခေါ် တိန်.သည် ထိုစဉ်အချိန်က မည်သို.မျှ မပြောကြားခဲ့သော်ငြား သူ၏နဂိုမူလ ရပ်တည်ချက်မှ တစ်လက်မမျှ နောက်မဆုတ်ခဲ့ပေ ။
၁၉၈၇ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၁၅ရက်နေ.တွင် ပြုလုပ်သည့် ပါတီတွင်း ဝေဖန်ဆန်းစစ်ရေး အစည်းအဝေး၅၌ (ထိုအစည်းအဝေးတွင် ဟူယောင်ဘန်း၏ အမှုကို ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့သည်) ၁၉၈၄ခုနှစ် ဇွန်လ၂၈ရက်နေ.တွင် တိန်.သည် သူ.ကိုအောက်ပါအတိုင်းပြောကြားခဲ့ကြောင်း ပေါ်လစ်ဗျူရိုအဖွဲ.ဝင် ဟူကျိလီက ဖွင့်ချခဲ့သည် ။ “ခင်ဗျားကို ဒီနေ.ဒီကိုလာဖို. ခေါ်ရတဲ့အဓိကအကြောင်းကတော့ ယောင်ဘန်းအကြောင်း ပြောဖို.ပဲ ။ ဂေါင်လျှို.ကျီ ၊ ဟူကျိဝေနဲ. ဝမ်ရူရှီတို.၆ ကိစ္စကို သူကိုင်တွယ်ခဲ့တဲ့နေရာမှာတင်မက အခြေခံမူ ၄ချက်အတည်ပြုရေးနဲ. လစ်ဘရယ်ဝါဒ ဆန်.ကျင်ရေးစတဲ့နေရာတွေမှာပါ ယောင်ဘန်းဟာ ပါတီအထွေထွေအတွင်းရေးမှုးတစ်ယောက်အနေနဲ. အားနည်းပျော့ညံ့ခဲ့တယ် ၊ ဒါဟာအဓိက အားနည်းချက်ပဲ”ဟု တိန်.ကပြောကြားခဲ့သည် ။ တိန်.က ယောင်ဘန်းကို တိုက်ရိုက်အပြောကြားခဲ့ပဲ ဟူကျိလီမှတစ်ဆင့် သူ၏သတင်းစကားတို.ကို ပြောကြားစေခဲ့သည် ။ “လစ်ဘရယ်ဝါဒကို ဆန်.ကျင်တဲ့နေရာမှာ ပျော့ညံ့ခြင်းဟာ ပါတီအထွေထွေအတွင်းရေးမှုးတစ်ယောက်အနေနဲ. အဓိက အားနည်းချက်ဖြစ်တယ်” စသည့် ပြင်းထန်သည့် စကားလုံးတို.ကိုပင် ပြောကြားစေခဲ့သည် ။
ဤအချက်က မေးခွန်းတစ်ခု ပေါ်ထွက်လာစေသည် ။ ယောင်ဘန်းသည် အခြေခံအချက်များကို မပြောင်းလဲနိုင်လျှင် သူသည် အထွေထွေအတွင်းရေးမှုး ရာထူးနှင့် သင့်လျှော်ပါသေး၏လော ။ တိန်.ပြောခဲ့သမျှတို.ကို ဟူကျိလီက ယောင်ဘန်းအား လုံးစေ့ပတ်စေ့ တစ်သဝေမတိမ်း ပြန်ပြောပြခဲ့သည် ။ သို.သော် ထိုသို.ပြောပြီးသည့်တိုင်အောင်ပင် ဤကိစ္စအပေါ်တွင် ယောင်ဘန်းက ဂရုမစိုက် သို.မဟုတ် အလေးမထားခဲ့ပေ ။ ဤအဖြစ်အပျက်တို.မှာ ၁၉၈၄ခုနှစ်အတွင်းက ဖြစ်ပွါးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည် ။
၁၉၈၅ခုနှစ် ဇူလိုင်လအတွင်း၌ တိန်.က ဟူကျိလီနှင့် လက်ထောက်ဝန်ကြီးချုပ် ကျိုရှီတို.ကို ဆွေးနွေးရန်အတွက် ခေါ်ယူခဲ့သည် ။ တကယ့်ပြဿနာအစစ်အမှန်မှာ ကြီးထွားလာနေသည့် လစ်ဘရယ်ဝါဒ ရေစီးကြောင်းပင်ဖြစ်ကြောင်း သူကထပ်မံပြောကြားခဲ့ပြန်သည် ။ “လူအချို. (ဝမ်ရူရှီကဲ့သို.သော လူများကို သူကဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်)သည် ကျွန်တော်တို.၏ ပြည်တွင်းနှင့် ပြည်ပမူဝါဒများကို ဆန်.ကျင်မှုပြုလုပ်ရာ၌ ယောင်ဘန်း၏ နံမည်ကိုအသုံးပြုရန် ယောင်ဘန်းအားမြှောက်ပင့်ပေးနေကြောင်း တိန်.ကပြောကြားခဲ့သည် ။ လစ်ဘရယ်ဝါဒ ဆန်.ကျင်ရေးနှင့်ပက်သက်ပြီး ယောင်ဘန်းကို ခင်ဗျားတို. ပိုပြီးမေးမြန်းသင့်တယ်” ဟု သူကပြောခဲ့သည် ။ ကျိလီနှင့် ကျိုရှီတို.က တိန်.ညွှန်ကြားသည့်အတိုင်း လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပြီး တိန်.၏ မှာကြားချက်တို.ကို ယောင်ဘန်းနှင့်ကျွန်တော်တို.အား ဘိုင်ဒိုင်ဟီ (နှစ်စဉ်နွေရာသီ၌ ပါတီအရာရှိများ တွေ.ဆုံလေ့ရှိသည့် ကမ်းခြေအပန်းဖြေစခန်း)၌ ပြောကြားခဲ့သည် ။
တိန်.သည် ဤအကြောင်းအရာကို အကြိမ်ကြိမ်အလေးပေး ပြောကြားနေသောကြောင့် သူ၏ပူပန်မှုအား အသင့်တော်ဆုံး တုံ.ပြန်သည့်အနေဖြင့် အထွေထွေအတွင်းရေးမှုး၏ ဋ္ဌာနအနေဖြင့် ဤကိစ္စကို အလေးပေးဆွေးနွေးရန် အစည်းအဝေးတစ်ခု ခေါ်ယူသင့်သည်ဟု ထိုစဉ်အချိန်က ကျွန်တော်တွေးခဲ့မိသည် ။ ကျွန်တော့်စိတ်ကူးကို ယောင်ဘန်းအားပြောပြခဲ့သည် သို.သော် အစည်းအဝေးကို မည်သည့်အချိန်တွင်ခေါ်ယူမည်လဲဟု ဟူကျိလီက မေးသောအခါ ယောင်ဘန်း၏ တစ်ခုတည်းသောအဖြေမှာ ဇင်ကျန်းသို. သူခရီးထွက်ရဦးမည်ဟူသော အဖြေသာဖြစ်သည်။ နောက်ပိုင်းတွင် ဇင်ကျန်းသို. သူတကယ်လည်း ခရီးထွက်ခဲ့ပါသည် ၊ ဤသို.ဖြင့် အစည်းအဝေးခေါ်မည့်ကိစ္စမှာ ရွှေ.ဆိုင်းသွားတော့သည် ။ တကယ်တမ်း၌ ဇင်ကျန်းသို. သူခရီးမထွက်မှီတွင် ဤကိစ္စကို ဖြေရှင်းခဲ့သင့်သည် သို.သော် ဤကိစ္စကို အရေးကြီးသည်ဟု သူမခံယူခဲ့ပေ ။
၁၉၈၅ခုနှစ်အတွင်း၌ ရှောင်ပင်းက ဤကိစ္စကို ထပ်မံပြောကြားလာပြန်သည် ။ အဘယ့်ကြောင့်နည်း ။ ၁၉၈၄ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလအတွင်း ပြုလုပ်ခဲ့သည့် စာရေးဆရာများအသင်း၏ စတုတ္ထအကြိမ် ကွန်ဂရက်နှင့် ပက်သက်နေသည်ဟု ကျွန်တော်ယုံကြည်သည် ။
ပြည်တွင်းပြည်ပမှ ဆန်.ကျင်ကန်.ကွက်ဝေဖန်မှုများကြောင့် စိတ်ဓာတ်ရေးရာညစ်နွမ်းမှု ရှင်းလင်းရေးကန်ပိန်းကို ဗြုန်းစားကြီးမပြောမဆို ရပ်တန်.အဆုံးသတ်လိုက်ပြီးနောက် ထိုအစည်းအဝေးအား ကျင်းပခဲ့ခြင်းဖြစ်သည် ။ ယောင်ဘန်း၏ အကြံပြုချက်အရ ဗဟိုကော်မတီမှ ဤအစည်းအဝေးသို. ပေးပို.သည့် သဝဏ်လွှာတွင် စိတ်ဓာတ်ရေးရာညစ်နွမ်းမှု ဆန်.ကျင်ရေး သို.မဟုတ် လစ်ဘရယ်ဝါဒဆန်.ကျင်ရေး စသည်တို.ကို ဖော်ပြမထားပေ ။ သဝဏ်လွှာကို စာကြမ်းရေးသားနေချိန်၌ ယောင်ဘန်းက “လစ်ဘရယ်ဝါဒ ဆန်.ကျင်ရေး”သည် တဖြည်းဖြည်း မှေးမှိန်လာပြီ ဆိုသည့်စကားစုကို သူထည့်သွင်းလိုကြောင်း ပြောလာသည် ။ အဖွဲ.အစည်းများဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဋ္ဌာနမှလည်း စာရေးဆရာများအသင်း၏ ခေါင်းဆောင်မှုတွင် ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မည်မဟုတ်ပဲ ခေါင်းဆောင်များကို သူတို.ဘာသာ လွတ်လပ်စွာ ရွေးချယ်ခွင့်ပြုမည်ဖြစ်ကြောင်း ဆုံးဖြတ်ထားသည် ။ လွတ်လပ်ခွင့် အပြည့်အဝရှိစေဖို. အထူးပြုထားခြင်းဖြစ်သည် ။
ဤအချက်အားလုံးမှာ လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်သည့် မှန်ကန်သည့် လုပ်ရပ်များသာဖြစ်သည် ။ သို.သော် ပြဿနာမှာ ဤကဲ့သို.သော လွတ်လပ်မှုမျိုးအောက်၌ စိတ်ဓာတ်ရေးရာညစ်နွမ်းမှုဆန်.ကျင်ရေး ကန်ပိန်းအတွင်းက ဝေဖန်ရှုတ်ချခံထားရသည့် သို.မဟုတ် ပြစ်ဒဏ်ခတ်ခြင်းခံထားရသည့် သူများအနေဖြင့် သူတို.၏ မကျေနပ်ချက်များကို ထုတ်ဖောက်ပစ်ရန်အတွက် လွတ်လပ်သွားပြီးလျှင် ကန်ပိန်းအတွင်း တက်ကြွစွာပါဝင်ခဲ့သူများကို အစွန်းရောက်သည့် သို.မဟုတ် မသင့်လျှော်သည့် ဝေဖန်ချက်များ တစ်ခါတစ်ရံ၌ ပြုလုပ်လာကြသည် ။ ခေါင်းဆောင်ရွေးချယ်သည့် ကိစ္စတွင်မူ “လက်ဝဲသမား” သို.မဟုတ် ကန်ပိန်းအတွင်း တက်ကြွစွာ ပါဝင်လှုပ်ရှားသူများ အားလုံးလိုလို ရွေးကောက်ပွဲတွင် ရှုံ့းနိမ့်သွားကြသည် ။
ဤအချက်က ရှေးရိုးစွဲဝါဒီ ဟူကျားမူနှင့် တိန်.လီကျန်တို.ကို တကယ်ပင်အကျပ်ရိုက်အခက်တွေ.သွားစေပြီးလျှင် ပါတီဝါရင့်များကိုလည်း စိတ်ကသိကအောက်ဖြစ်သွားစေခဲ့သည် ။ အဆုံး၌ တိန်.၏ စိတ်ဓာတ်ရေးရာညစ်နွမ်းမှု ဆန်.ကျင်ရေးကန်ပိန်းအပေါ် သူတို.၏မကျေနပ်ချက်များကို ဖောက်ထုတ်ရန်အတွက် စာပေနှင့်အနုပညာလောကမှ သူများကို ဟူယောင်ဘန်းက အားပေးအားမြှောက်ပြုနေသည်ဟု တိန်.ရှောင်ပင်း၏စိတ်တွင် ထင်မြင်ယူဆလာစေခဲ့သည် ။ သို.ကြောင့်သာလျှင် သူက ကျိလီနှင့်ကျိုးရှီတို.အား သူ၏အမှာစကားတို.ကို(လစ်ဘရယ်ဝါဒ ဆန်.ကျင်ရေးနှင့်ပက်သက်၍ ပိုမိုပြောကြားရန်) ယောင်ဘန်းထံသို. ထပ်ဆင့်ပြောကြားရန် အကြိမ်ကြိမ် ပြောနေခြင်းဖြစ်သည် ။ သူသုံးစွဲသည့် စကားလုံးတို.မှာ လွန်စွာပင်ပြင်းထန်လှသည် သူက လူတစ်ချို.သည် တရုတ်ပြည်၏ ပြည်တွင်းပြည်ပမူဝါဒများကို ဆန်.ကျင်ရန်အတွက် ယောင်ဘန်း၏အမည်ကို အသုံးပြုနေကြကြောင်း တစ်နည်းအားဖြင့် “တိန်.ရှောင်ပင်းကို ဆန်.ကျင်ရန်အတွက် ယောင်ဘန်း၏နာမည်ကို အသုံးပြုနေကြကြောင်း” သူကပြောကြားခဲ့သည် ။
သို.သော်လည်း ယောင်ဘန်းက အလေးမထားခဲ့ပေ ။ ဤကဲ့သို.သောကိစ္စများတွင် ပုံမှန်အားဖြင့် အထွေထွေအတွင်းရေးမှုးရုံးမှ အစည်းအဝေးတစ်ခုခေါ်ယူပြီး ယောင်ဘန်းကမိန်.ခွန်းစကားပြောကြားရသည် ပြီးနောက် တိန်.ထံသို.သွားရောက်ဆွေးနွေးရမည်ဖြစ်သည် ။ ထိုစဉ်အချိန်ကာလက တိန်.ရှောင်ပင်းကို ဆန်.ကျင်ဖို. မည်သို.မျှမဖြစ်နိုင်ပေ ။ အယူအဆအမျိုးမျိုးကို ထုတ်ဖော်ပြောကြားနိုင်ပြီး တိန်.နှင့်ဆွေးနွေးနိုင်သည်မှာ အမှန်ပင်ဖြစ်သည်။
ယနေ.ထိတိုင်ကျွန်တော် မဖြေနိုင်သေးသည့် မေးခွန်းမှာ ဤကိစ္စကို မည်သည့်အတွက်ကြောင့် ယောင်ဘန်းမျက်ကွယ်ပြုခဲ့သနည်း ၊ ဤကိစ္စကို အဘယ့်ကြောင့် သူအလေးအနက်မထားခဲ့ရသနည်း ဆိုသည့်မေးခွန်းပင်ဖြစ်သည် ။ တိန်.၏လုပ်ရပ်မှာ မလျော်ကန်ကြောင်း ၊ သူ.အနေဖြင့်လည်း မည်သည့်အမှားအယွင်းကိုမျှ မလုပ်ခဲ့ကြောင်း သူယုံကြည်ကောင်းယုံကြည်နေပါလိမ့်မည် ၊ ထို.ကြောင့် သူ၏ရပ်တည်ချက်လမ်းကြောင်းကို ပြောင်းလဲလိုစိတ်မရှိခြင်း ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါလိမ့်မည် ။ တိန်.နှင့်ဆွေးနွေးခြင်းဖြင့် ဤကိစ္စကို ဖြေရှင်းနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ် ၊ တိန်.အနေဖြင့် သူ၏ရပ်တည်ချက်ကို လက်ခံနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ဟု ယုံကြည်နေ၍ ဤကိစ္စကို ရှောင်ရှားနေခြင်းလည်း ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါသည် ။ ဤအချက်အားလုံးက လစ်ဘရယ်ဝါဒ ဆန်.ကျင်ရေးနှင့်ပက်သက်၍ ယောင်ဘန်းသည် သူနှင့်ဝေးကွာသည်ထက်ပို၍ ဝေးကွာသွားပြီဟု ထင်မြင်နေသည့် တိန်.၏ခံစားချက်များကို ပို၍ဆိုးရွားသွားစေခဲ့သည် ။
စိတ်ဓာတ်ရေးရာညစ်နွမ်းမှု ဆန်.ကျင်ရေးကန်ပိန်းကို တိန်.စတင်အဆိုပြုခဲ့သည့် ၁၉၈၃ခုနှစ် အောက်တိုဘာလမှစ၍ လူတစ်ချို.က ယောင်ဘန်း၏နာမည်ကို အသုံးချ၍ လစ်ဘရယ်ဝါဒလှုပ်ရှားမှုများ ပြုလုပ်နေသည်ဟု တိန်.ပြောကြားခဲ့သည့် ၁၉၈၇ခုနှစ် ဇူလိုင်လအထိ ပြဿနာမှာ ကန်ပိန်း၏မှန်ကန်မှုနှင့်ပက်သက်၍ အခြေအတင်ဖြစ်နေမှုကို ဗဟိုပြုနေသည် ။ သူတို.၏ သဘောကွဲလွဲမှုမှာ ပို၍ပြင်းထန် ပို၍ထင်ရှားလာပြီးလျှင် သူတို.နှစ်ဦးမှာ ပို၍ထိပ်တိုက်တွေ.လာတော့သည် ။
လစ်ဘရယ်ဝါဒ ဆန်.ကျင်ရေးကန်ပိန်းနှင့်ပက်သက်၍ နောက်ဆုံးအငြင်းပွါးမှုမှာ ၁၉၈၆ခုနှစ် စက်တင်ဘာလအတွင်း ကျင်းပခဲ့သည်. ၁၂ကြိမ်မြောက်ဗဟိုကော်မတီ ဆဋ္ဌမအကြိမ် စုံညီအစည်းအဝေး၏ အဆုံးသတ်ကာလအတွင်း “စိတ်ဓာတ်ရေးရာ ယဉ်ကျေးသည့်လူ.အဖွဲ.အစည်း တည်ဆောက်ခြင်းအပေါ် ဆုံးဖြတ်ချက်”ဟူသည့် ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ချမှတ်သည့်အချိန်တွင် ပေါ်ထွက်လာခဲ့သည် ။ ဆုံးဖြတ်ချက်၏ ပထမမူကြမ်းကို ယောင်ဘန်း၏ ကြီးကြပ်မှုဖြင့် ရေးသားခြင်းဖြစ်သည် ။ မူကြမ်း၌ လစ်ဘရယ်ဝါဒ ဆန်.ကျင်ရေးနှင့် ပက်သက်၍ တစ်လုံးတစ်ပါဒမျှ ဖော်ပြမထားပေ ။ မူကြမ်းနှင့်ပက်သက်၍ ဘိုင်ဒိုင်ဟီ၌ ဆွေးနွေးကြသောအခါ ဟူကျားမူနှင့် တိန်.လီကျန်တို.က လစ်ဘရယ်ဝါဒ ဆန်.ကျင်ရေးနှင့်ပက်သက်၍ ဖြည့်စွက်ထည့်သွင်းရန် အဆိုပြုကြသောအခါ ကျွန်တော်အပါအဝင် လူအများစုက သဘောတူထောက်ခံကြသည် ။ ယောင်ဘန်းက ဖြည့်စွက်ထည့်သွင်းချက်ကို လက်ခံခြင်းဖြင့် အလျှော့ပေးခဲ့သည် ။
သို.သော်လည်း ၁၂ကြိမ်မြောက်ဗဟိုကော်မတီ ဆဋ္ဌမအကြိမ်စုံညီအစည်းအဝေး၏ အစုအဖွဲ.အဆင့်၌ ဆွေးနွေးကြသောအခါတွင် လျူတင်းယိ(ပါတီတွင်းသတ်မှတ်ချက်အရ လစ်ဘရယ်ဝါဒလက်ခံသည့် စာရေးဆရာ)နှင့် တခြားလူတစ်ချို.က ဤသို.သောအကြောင်းအရာမျိုးကို သူတို.သဘောမတူကြောင်း ပြောကြားလာကြသည် ။ ဆုံးဖြတ်ချက်မူကြမ်းကို မဲခွဲကြသောအခါ၌ လျူတင်းယိက မိန်.ခွန်းတစ်ခုကို လက်တမ်းပြောတော့သည် ။ မိန်.ခွန်း၌ “ယဉ်ကျေးမှုတော်လှန်ရေးအတွင်းက လေးဦးဂိုဏ်းဟာ ‘ဘူဇွာလစ်ဘရယ်ဝါဒ’ ဆိုပြီး လူတွေကို ပြစ်ဒဏ်ချဖို.အတွက်ရည်ရွယ်ပြောဆိုချင်တဲ့အခါတိုင်းမှာ ရည်ညွှန်းပြောကြားခဲ့တယ် ။ အဲဒါကြောင့် ဒီအသုံးအနှုံးကို မသုံးစွဲသင့်ဘူး”ဟု သူကပြောခဲ့သည် ။ လျူ၏မိန်.ခွန်းက အစည်းအဝေးတက်ရောက်လာသူတစ်ချို.၏ လက်ခုပ်သံများကို ရရှိခဲ့သည် ။
ရှေးရိုးစွဲပါတီဝါရင့်ကြီး ဝမ်ဇန်းနှင့်ဘိုယိဘိုတို.က လစ်ဘရယ်ဝါဒဆန်.ကျင်ရေး ဆိုသည့်စကားစုကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်း ထည့်သွင်းရမည်ဟု မိန်.ခွန်းပြောကြရာ သူတို.သည်လည်း လက်ခုပ်သံများ ရရှိကြပြန်သည် ။ ယောင်ဘန်းကမူ မရေမရာတုံ.ပြန်သည် ။ ဆုံးဖြတ်ချက်မူကြမ်းကို အကြိမ်များစွာ ဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးဖြစ်ကြောင်း လူအများစုကလည်း အဆိုပါစကားစုကို ဆက်လက်ထည့်သွင်းသင့်သည်ဟု ထောက်ခံသဘောတူကြကြောင်း ကျွန်တော့်အနေဖြင့် ထိုအချက်ကို မပြောင်းလဲပဲ ဆက်လက်ထည့်သွင်းဖို. သဘောတူကြောင်း ကျွန်တော်ကပြောခဲ့သည် ။
တိန်.ရှောင်ပင်းက အလွန်လေးနက်စွာပြောကြားသည် ။ “ဘူဇွာလစ်ဘရယ်ဝါဒ ဆန်.ကျင်ရေးနှင့်ပက်သက်ပြီး ကျွန်တော်က သူများတွေထက်ပိုပြီးပြောခဲ့တယ် ၊ ပိုပြီးတော့လည်း စွဲစွဲမြဲမြဲနဲ.တောက်လျှောက်ပြောလာခဲ့တယ် ။ ဒီအကြောင်းအရာကို ခုတင်မကဘူး နောင်ဆယ်နှစ် အနှစ်နှစ်ဆယ်ကြာသည့်တိုင်လည်း ဆက်ပြီးပြောနေဦးမှာပဲ ။ ဒီစကားလုံးတွေကို ဘယ်တုန်းကပြောခဲ့တယ် အတိတ်ကာလတုန်းက ဘယ်သူကပြောခဲ့တယ် ဆိုတာတွေက ဘာမှအရေးမပါဘူး ။ ဒါတွေက အရေးမကြီးဘူး”ဟု သူကပြောခဲ့သည် ။ ဤမျှသာဖြစ်သည် ။ နောက်ဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်ကို သူကချမှတ်ပေးလိုက်တော့သည် ။ တက်ရောက်လာသူအားလုံး သူတို.၏လက်များကိုမြှောက်ပြခြင်းဖြင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ကို စုံညီအစည်းအဝေးက အတည်ပြုချက်ပေးခဲ့သည် ။
အစည်းအဝေးကို အထွေထွေအတွင်းရေးမှုးဖြစ်သည့် ယောင်ဘန်းက သဘာပတိအဖြစ် ဦးစီးကျင်းပခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး သူ၏မပြတ်သားသည့် ရပ်တည်ချက်က တိန်.အားနောက်ဆုံးအချိန်တွင် တိုက်ရိုက်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်သည့် အနေအထားသို.ရောက်ရှိသွားစေခဲ့သည် ။ ယောင်ဘန်းနှင့်ပက်သက်၍ တိန်.၏မကျေနပ်ချက်မှာ ငြင်း၍မရနိုင်တော့ပေ ။ အစည်းအဝေးနှင့်ပက်သက်သည့် အစီရင်ခံစာကို ထုတ်ဝေဖြန်.ချိသည့်အခါ၌ ယောင်ဘန်းက အတည်ပြုလိုက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုသာ ဖြန်.ချိစေခဲ့သည် ။ ဆွေးနွေးခဲ့သည့် အကြောင်းအရာနှင့် တိန်.၏မိန်.ခွန်းတို.ကို မဖော်ပြခဲ့ပေ ။ ဤကိစ္စနှင့်ပက်သက်၍ နောက်ပိုင်း၌ ဘိုယိဘိုက ယောင်ဘန်းကို တိုက်ခိုက်လာသည် ။ တိန်.၏မိန်.ခွန်းကို အဘယ့်ကြောင့် မဖြန်.ချိရသနည်းဟု သူကမေးခွန်းထုတ်ခဲ့သည် ။
အပေါ်ယံအားဖြင့်ကြည့်ပါမူ အစည်းအဝေး၌ အငြင်းပွါးကြခြင်းမှာ လျူတင်းယိ၏ မိန်.ခွန်းနှင့်ပက်သက်၍ တိန်.ကဝေဖန်ခြင်းသာဖြစ်သည် ။ သို.သော် တကယ်တမ်း၌ တိန်.က ယောင်ဘန်းကို ဝေဖန်ရှုံ.ချခြင်းသာဖြစ်သည်မှာ ရှင်းလင်းထင်ရှားပါသည် ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် လျူ၏အမြင်မှာ ယောင်ဘန်း၏ အယူအဆကို ကိုယ်စားပြု ထင်ဟပ်နေခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည် ။
သို.သော်လည်း ၁၂ကြိမ်မြောက်ဗဟိုကော်မတီ ဆဋ္ဌမအကြိမ်စုံညီအစည်းအဝေး၌ အငြင်းပွါးခဲ့ခြင်းသည် ယောင်ဘန်းအပေါ်ထားရှိသည့် တိန်.၏သဘောထားကို များစွာပြောင်းလဲသက်ရောက်မှု မရှိခဲ့ပေ ။ ဤအဖြစ်အပျက် မဖြစ်ပွါးမှီကတည်းကပင် ယောင်ဘန်းကို ဖယ်ရှားရန် တိန်.ကဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည် ။ တိန်.သည် အပြောင်းအလဲတွင် ချောချောမွေ.မွေ.ဖြစ်စေရန်အတွက် ၁၃ကြိမ်မြောက် ပါတီတကွန်ဂရက်တွင် ခေါင်းဆောင်ပိုင်းကို အပြောင်းအလဲလုပ်ရန် စီစဉ်နေခဲ့သည် ။ ထို.ကြောင့် ဤအစည်းအဝေး၌ ဟူအပေါ်မကျေနပ်ချက်ကို ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့ပြီးဖြစ်သော်လည်း ဟူကို အထွေထွေအတွင်းရေးမှုးအဖြစ် ဆက်လက်တာဝန်ပေးခြင်း မပေးခြင်းအတွက် ဤအချက်က မည်သို.မျှ သက်ရောက်မှုရှိမည်မဟုတ်ပါ ။
ဟူကို တိန်.ဝေဖန်ရှုတ်ချခြင်းတွင် အခြားသော အကြောင်းအချက်များလည်း ရှိပါသေးသည် ။ ဥပမာအားဖြင့် ဟူသည် နှိုင်းနှိုင်းချိန်ချိန် မလုပ်တတ်ဟု တိန်.ကယုံကြည်သည် ။ (ဟူကို အထွေထွေအတွင်းရေးမှုးအဖြစ် မခန်.မှီကပင် ဤအချက်ကို အားနည်းချက်အဖြစ် သူကလက်ခံခဲ့ပြီးဖြစ်သည် ။) နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒတွင် ဟူသည် မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင် ကင်အီဆွန်းနှင့် ရင်းနှီးနွေးထွေးလွန်းပြီး မြောက်ကိုရီးယား၏ တောင်းဆိုမှုများကို သာမန်ကာလျှံကာ လွယ်လင့်တကူ လိုက်လျောပေးလေ့ရှိသည် ။ ဥပမာအားဖြင့် တရုတ်ပြည်မှ ဂျက်လေယာဉ်များ ထောက်ပံ့ရန် ၊ ကိုရီးယား ပိုင်းလော့များကို တရုတ်လေတပ် အခြေစိုက်စခန်းများတွင် လေ့ကျင့်ပေးရန်နှင့် အရေးပေါ်အခြေအနေတွင် တရုတ်လေတပ်ကို ဖြန်.ကျက်ချထားပေးရန် စသည်တို.ဖြစ်သည် ။ ဘေဂျင်းသို. ဟူပြန်ရောက်ရောက်ချင်းပင် အဆိုပြုချက်တို.ကို တိန်.ကပယ်ချခဲ့သည် ။ ဂျပန်နိုင်ငံသို. ခရီးထွက်စဉ်ကလည်း ဂျပန်လူငယ် သုံးထောင်ကို တရုတ်ပြည်သို. လာရောက်လည်ပတ်ရန် ကြိုတင်ဆွေးနွေးမှုမရှိပဲ ဖိတ်ခေါ်ခဲ့သည် ။ တိန်.မှာ ကသိကအောက်ခံစားရသည် ။ သို.သော် ဟူသည် အထွေထွေအတွင်းရေးမှုးဖြစ်ပြီး ကမ်းလှမ်းဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပြီးဖြစ်၍ ပြောင်းလဲဖို.ခက်ပေသည် ။ ယောင်ဘန်းသည် ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ် ယာဆူဟီရို နာကာဆိုနေနှင့် ပုဂ္ဂိုလ်ရေး ပေးစာများ အပြန်အလှန်ရေးသားကြပြီး သူ၏နေအိမ်တွင် ညစာစားပွဲဖြင့် ဧည့်ခံခဲ့သည် ။ ဤအချက်ကို တိန်.က စိတ်မချမ်းမသာဖြစ်၍ “တရုတ်ပြည်ဟာ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး သံတမန်ဆက်ဆံမှုကို ဘယ်တုန်းကမှ မကျင့်သုံးခဲ့ဘူး ။ ငါတို.ထဲက လူတစ်ချို.မှာ နာကာဆိုနေနဲ. ပုံမှန်ဆက်ဆံနိုင်တဲ့ အရည်အချင်း မရှိဘူးထင်ပါရဲ.”ဟု ပြောကြားခဲ့သည် ။
မည်သို.ပင်ဖြစ်စေ တိန်.သည် ဟူ၏ အရည်အချင်းများ ၊ အားနည်းချက်များနှင့်ပက်သက်၍ ရှင်းလင်းစွာ လက်ခံထားပြီးဖြစ်သောကြောင့် ဤအချက်များက သူတို.၏ ဆက်ဆံရေးအပေါ် ကြီးမားစွာ အကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိလိမ့်မည်ဟု ကျွန်တော်မထင်ပါ ။ ဤကိစ္စများနှင့်ပက်သက်၍ တိန်.သည် ဟူကို ဝေဖန်ရှုတ်ချခဲ့ပြီးဖြစ်သော်ငြား ဤအချက်များက ဟူအပေါ် သူ၏ယုံကြည်မှုနှင့် အကဲဖြတ်ချက်များတွင် အကျိုးသက်ရောက်မှု မရှိခဲ့ပါ ။
လစ်ဘရယ်ဝါဒအပြင် တိန်.နှင့် ဟူအကြားမှ ဆက်ဆံမှုကို သက်ရောက်စေသည့် တခြားဖြစ်ရပ်တစ်ခုမှာ ၁၉၈၅ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလအတွင်းက (ဟောင်ကောင်မှ လူသိများထင်ရှားသည့် သတင်းစာဆရာ) လူကန်နှင့် ပြုလုပ်ခဲ့သည့် ယောင်ဘန်း၏ အင်တာဗျူးဖြစ်သည် ။ ၁၉၈၅ခုနှစ် ဇူလိုင်လအတွင်း ကျိလီ ၊ ကျိူရှီတို.နှင့် တွေ.ဆုံသည့် အစည်းအဝေးတစ်ခု၌ လူကန်နှင့်ပြုလုပ်ခဲ့သည့် အင်တာဗျူးအတွင်း ဟူ၏ပြောကြားချက်များမှာ အလွန်ပင် မလျော်ကန်လှကြောင်း တိန်.က ပြောကြားခဲ့သည် ။ လူကန်က ကျွန်တော်တို.၏ ပြည်တွင်းပြည်ပ မူဝါဒများကို မှိုချိုးမျှစ်ချိုး ပြောကြားခဲ့သည် ၊ သို.သော် သူ၏မှတ်ချက်များကို ယောင်ဘန်းအား မြှောက်ပင့်ပေးသည့် မြှောက်လုံးပင့်လုံးများအဖြစ် ပုံဖျက်ဖုံးဖိ၍ ပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည် ။ ယောင်ဘန်းသည် စကားလုံးများကို သေသေချာချာ မစဉ်းစားပဲ ပေါ့ပြက်ပြက် တုံ.ပြန်ပြောကြားခဲ့သည် ။ တကယ်တမ်း၌ ယောင်ဘန်းက သူ.ကို အားပေးအားမြှောက်ပြုလုပ်ခဲ့သည် ။ ဤအကြောင်းကို ထိုစဉ်က ကျွန်တော့်အား အသိမပေးခဲ့ပါ ။
၁၉၈၆ခုနှစ် နွေရာသီအတွင်း၌ တိန်.ရှောင်ပင်းက (တရုတ်နိုင်ငံ သမ္မတ) ယန်ရှန်ကွမ်းအား “ယောင်ဘန်းနဲ. သတင်းထောက်တစ်ယောက် အင်တာဗျူးလုပ်တဲ့အကြောင်း ခင်ဗျားသိသလား”ဟု မေးခဲ့သည် ။ မှတ်တမ်းကို ရှာဖတ်ရန် ယန်အား သူကပြောကြားခဲ့သည် ။ ထိုအကြောင်းကို ရှန်ကွမ်းက ဘိုင်ဒိုင်ဟီမှ သူပြန်ရောက်သောအခါ ကျွန်တော့်အားပြောခဲ့သည် ။ လူအားပြောကြားခဲ့သည့် ယောင်ဘန်း၏ ပြောကြားချက်များသည် ဘောင်ကျော်နေသည်ဟု တိန်.ကယူဆနေပြီး အလွန်ပင်စိတ်ဆိုးနေသည်ဟု သူကပြောခဲ့သည် ။ နောက်ပိုင်း၌ ကျွန်တော့်ထံသို. မိတ္တူတစ်စောင် ပို.ပေးရန် အထွေထွေရုံးအား ရှန်ကမ်းက ညွှန်ကြားခဲ့သည် ။
လူကန်သည် ဝါရင့်သတင်းထောက်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး “လက်ယာသမား”အဖြစ် တံဆိပ်တပ်ခံရသူဖြစ်သည် ။ သူသည် ၁၉၈၇ခုနှစ်အတွင်းက ဟောင်ကောင်သို. ဝင်ရောက်ခွင့် လျှောက်ထားခဲ့ပြီး နောင်တွင် ဘိုင်ဇင်း(သာမာန်ပြည်သူ) မဂ္ဂဇင်း၏ အယ်ဒီတာချုပ်ဖြစ်လာခဲ့သည် ။ ယောင်ဘန်းနှင့် အင်တာဗျူးသောအခါ၌ စကားဝိုင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုမှာ ဟူယောင်ဘန်းအား ကမ္ဘာကြီးက ပို၍သိရှိနားလည်လာစေရန်ဖြစ်ကြောင်း သူကပြောခဲ့သည် ။
နိုင်ငံ၏ ပုံရိပ်သည် ယောင်ဘန်း၏ ပုံရိပ်နှင့် ဆက်နွယ်ပက်သက်နေကြောင်း လူက ပြောခဲ့သည် ။ သူက ယောင်ဘန်းသည် အသိဥာဏ် ကြွယ်ဝ၍ ရိုးသားဖြောင့်မတ်သော နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး လျှို.ဝှက်ကြံစည်မှုများ မည်သည့်အခါမျှ မလုပ်တတ်သောသူ ၊ သဘောထားကြီးသောသူ ၊ အသိအမြင် ပွင့်လင်းမှုရှိ၍ နားလည်နိုင်စွမ်းရှိသူ ၊ အားမာန်အပြည့်ရှိသူ စသည်ဖြင့် အမွှမ်းတင်ပြောကြားခဲ့သည် ။ ယောင်ဘန်းအား မြှောက်ပင့်ရုံအပြင် “ဗဟိုစစ်ကော်မရှင်ကို တိန်.အဖိုးကြီး သက်ရှိထင်ရှားရှိနေတုန်းမှာ ခင်ဗျား ဘာဖြစ်လို. လွှဲပြောင်းတာဝန်မယူတာလဲ ။ ခင်ဗျား လွှဲမယူခဲ့ရင် တကယ်လို.များ အနာဂတ်မှာ စစ်တပ်က တပ်မှုးတွေက ခင်ဗျားကို ဆန်.ကျင်လာခဲ့ရင် အခြေအနေတွေကို ခင်ဗျားဘယ်လိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းမလဲ ။ အခြေအနေတွေကို ခင်ဗျား ထိန်းချုပ်နိုင်ပါ့မလား”ဟု လူကန်းက မေးမြန်းခဲ့သည် ။
ယောင်ဘန်းက ဤအကြောင်းကို သူဘယ်တုန်းကမျှ မစဉ်းစားခဲ့ဖူးကြောင်း ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့သည် ။ “ကျောက်ကျိယန်နဲ. ကျွန်တော်ဟာ စီးပွါးရေး ၊ ပါတီအရေးတွေနဲ. အလုပ်များနေကြတယ် ။ စစ်တပ်ဟာ ဝါရင့်ကြီးတွေရဲ. ကြီးကြပ်မှုအောက်မှာရှိတယ် ၊ လောလောဆယ်မှာ စစ်တိုက်စရာလည်း မရှိပါဘူး ဒါကြောင့် ဒီနေရာကို ရှောင်ပင်းပဲ တာဝန်ယူထားပါစေ ။ အဲဒီလို စီမံထားခြင်းအားဖြင့် ကျိယန်နဲ.ကျွန်တော်ဟာ စီးပွါးရေးနဲ. ပါတီရေးရာ ကိစ္စရပ်တွေကို အာရုံစိုက်ပြီး စီမံခန်.ခွဲနိုင်ကြတယ်”ဟု ယောင်ဘန်းက ဖြေကြားခဲ့သည် ။
အင်တာဗျူး၌ ချန်ယန်း ၊ ဝမ်ဇန်း ၊ ဟူကျားမူနှင့် တိန်.လီကျန်တို.နှင့်ပက်သက်၍ ရိုင်းစိုင်းသည့် မှတ်ချက်များ လူကန်းက ပြောခဲ့သေးသည် ။
စကားဝိုင်းက တိန်.၏ မကျေနပ်မှုများကို မီးထိုးပေမည်မှာ အမှန်ပင်ဖြစ်သည် ။ ဗဟိုစစ်ကော်မရှင်နှင့်ပက်သက်သည့် ရည်ညွှန်းပြောကြားချက်က သူ.အား အထူးသဖြင့် မကျေမချမ်းဖြစ်စေသည် ။ ဤအချက်နှင့်ပက်သက်၍ ယောင်ဘန်း၏ အတွင်းစိတ်ထဲ၌ သူသည် လူကန်းပြောသည့် အချက်တို.ကို သဘောတူထောက်ခံနေသည်ဟု တိန်.က အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်နေပေလိမ့်မည် ။
ယောင်ဘန်းထံသို. အမှာစကားပါးရန်အတွက် ၁၉၈၅ခုနှစ် ဇူလိုင်လအတွင်း၌ ကျိလီ ၊ ကျိူရှီတို.နှင့် တွေ.ဆုံပြောကြားသည့် စကားဝိုင်းတွင် တိန်.က လူကန်အင်တာဗျူးကို ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည် ။ ၁၉၈၆ခုနှစ် နွေရာသီအတွင်း ဘိုင်ဒိုင်ဟီ၌ တွေ.ဆုံသည့် အစည်းအဝေးတွင်လည်း တိန်.က ထိုအကြောင်းကို ထပ်မံပြောကြားခဲ့ပြီး ယန်ရှန်ကွမ်းကဲ့သို.သော ပါတီဝါရင့်များနှင့် ဤကိစ္စကို ဆွေးနွေးခဲ့သည် ။
လစ်ဘရယ်ဝါဒအပေါ် ထားရှိသည့် ဟူယောင်ဘန်း၏ သဘောထားနှင့်ပက်သက်၍ နဂိုမူလကပင် မကျေမနပ်ဖြစ်နေသည့် တိန်.အား လူကန်းအင်တာဗျူးက မီးထိုးလှုံ.ဆော်ပေးသလိုဖြစ်ပြီး ယောင်ဘန်းအား ဖယ်ရှားရန် ဆုံးဖြတ်စေခဲ့သည်ဟု ကျွန်တော်ယူဆသည် ။
၁၉၈၇ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ၌ ယောင်ဘန်း ရာထူးမှ နှုတ်ထွက်သည် ၊ သို.သော် ၁၉၈၆ခုနှစ် နွေရာသီအတွင်း ဘိုင်ဒိုင်ဟီ၌ သို.မဟုတ် ထို.ထက်ပို၍ စောစီးစွာကပင် တိန်.သည် သူ၏စိတ်ကိုပိုင်းဖြတ်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည် ။ တိန်.၏ ယောင်ဘန်းနှင့် လူကန်တို.၏ အင်တာဗျူးကို ဝေဖန်ရှုတ်ချမှုမှာ လူသိများလာသည် ။ ဥရောပသို. ယောင်ဘန်းခရီးထွက်သောအခါ၌ သတင်းထောက်များက ခေါင်းဆောင်မှု အပြောင်းအလဲအကြောင်းနှင့် တိန်.ရှောင်ပင်း အနားယူမယူတို.ကို မေးမြန်းကြသည် ။ ယောင်ဘန်း၏ အကျင့်မှာ သတိသမ္ပဇဉ် မမြဲပဲ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ပြောဆိုမှုပင်ဖြစ်သည် ။ သူပြောခဲ့သည့် အကြောင်းအရာ တချို.မှာ မလျော်ကန်လှပေ ။ တိန်.ရှောင်ပင်း အနားယူတော့မည်ဟု ပြည်သူလူထုအတွင်း ထင်မြင်လာစေရန် ယောင်ဘန်းက ဖန်တီးနေသည်ဟု ပါတီဝါရင့်တချို.က အတိအလင်းပင် ထုတ်ဖော်ပြောကြားလာကြသည် ။ ဤအချက်ကလည်း ဟူနှင့်ပက်သက်သည့် တိန်.၏သဘောထားကို အကျိုးသက်ရောက်စေသည် ။
ဤအချက်များအရ တိန်.သည် ယန်ရှန်ကွမ်းနှင့် တခြားဝါရင့် ရဲဘော်များအား ၁၉၈၆ခုနှစ် နွေရာသီအတွင်း ဘိုင်ဒိုင်ဟီ၌ သူအကြီးအကျယ်မှားသွားခဲ့ကြောင်း ၊ ယောင်ဘန်းကို သူလွဲမှားစွာ အကဲဖြတ်ခဲ့ကြောင်း သူကပြောကြားခဲ့သည် ။ ဤစကားမှာ အဆုံးအဖြတ်ပင်ဖြစ်သည် ။ ထိုသို.ပြောပြီးနောက် ၁၃ကြိမ်မြောက် ပါတီကွန်ဂရက်မှစ၍ ဟူသည် အထွေထွေအတွင်းရေးမှုးအဖြစ် ဆက်လက်တည်ရှိတော့မည်မဟုတ်ကြောင်း သူက သူတို.အား ပြောကြားခဲ့သည် ။ တနည်းအားဖြင့်ဆိုရပါက ယောင်ဘန်းသည် အထွေထွေအတွင်းရေးမှုးအဖြစ် ဆက်လက်တည်ရှိတော့မည်မဟုတ်ကြောင်း ဆုံးဖြတ်ချက်အား တိန်.နှင့် ပါတီဝါရင့်ကြီးများက ၁၉၈၆ခုနှစ် နွေရာသီအတွင်း ဘိုင်ဒိုင်ဟီ၌ အပြီးသတ် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည် ။
တိန်.မည်သို.မည်ပုံ ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည် ၊ မည်သည့် ပါတီဝါရင့်ကြီးများနှင့် ဆွေးနွေးခဲ့သည် ဆိုသည်ကို ကျွန်တော်မသိပါ ။ သို.သော်လည်း ထို.နောက်ပိုင်း၌ ယန်ရှန်ကွမ်းနှင့် ဘိုယိဘိုအပါအဝင် တခြားပါတီဝါရင့်ကြီးများ၏ ယောင်ဘန်းအပေါ် ထားရှိသည့် သဘောထားများ ပြောင်းလဲလာသည်မှာ အထင်အရှားပင်ဖြစ်သည် ။ ထို.မတိုင်မှီက ဟူကို သူတို.ဝေဖန်သည့်တိုင် ၊ သူ၏တချို.ပြောစကားများကို သဘောမတူသည့်တိုင် သူတို.သည် ဟူအား လေးစားမှုတချို. ပြသခဲ့ကြသေးသည် ။ နောက်ပိုင်း၌မူကား သူတို.၏ မလေးစားမှု ၊ မကျေနပ်မှုနှင့် အလေးမထားမှုတို.မှာ အပေါ်ယံမျက်နှာပြင်သို.တိုင် ပေါ်ထွက်လာခဲ့တော့သည် ။
ဤအချက်အားလုံးသည် ၁၂ကြိမ်မြောက် ဗဟိုကော်မတီ ဆဋ္ဌမအကြိမ်စုံညီအစည်းအဝေးတွင် တင်သွင်းအဆိုပြုမည့် “စိတ်ဓာတ်ရေးရာ ယဉ်ကျေးသည့်လူ.အဖွဲ.အစည်း တည်ဆောက်ခြင်းအပေါ် ဆုံးဖြတ်ချက်”ဟူသည့် ဆုံးဖြတ်ချက်မူကြမ်းကို ယောင်ဘန်း ပြုစုနေစဉ်ကာလအတွင်း ပေါ်ပေါက်လာခဲ့သည် ။ မူကြမ်းကို ဆွေးနွေးနေစဉ်ကာလအတွင်း အတည်မပြုနိုင်ခဲ့ပေ ။ အသေးအဖွဲအချက်အနည်းငယ်ကို ပြောင်းလဲပြင်ဆင်ရန် တောင်းဆိုမှုများကြောင့်သာမက လူများစွာက ၎င်းသည် အခြေခံအားဖြင့် သင့်လျော်လျှောက်ပတ်မှုမရှိဟု ထင်မြင်ယူဆကြပြီး တချို.ကဆိုလျှင် ဆုံးဖြတ်အတည်ပြုချက်သည် အမှန်တကယ် လိုအပ်ပါ၏လောဟူ၍ပင် သံသယ ဝင်နေကြသောကြောင့်ဖြစ်သည် ။ ဆွေးနွေးပွဲအတွင်းတွင် ရှေးရိုးစွဲ အယူဝါဒပြင်းထန်သည့် တိန်.လီကျန်က မိန်.ခွန်းတစ်ခုပြောကြားပြီး မူလအဆိုပြုထားသည်နှင့် လုံးဝကွဲပြားခြားနား၍ တိန်.ရှောင်ပင်းကို များစွာကိုးကားထားသည့် မူကြမ်းတစ်စောင်ကို တင်ပြလာသည် ။ တိန်.ရှောင်ပင်းက တိန်.လီကျန်၏ မိန်.ခွန်းနှင့် သူ၏မူကြမ်းကို သဘောမတူခဲ့ပေ ။ “တိန်.လီကျန်က ကျွန်တော်ပြောတာတွေကို ကိုးကားထားပေမယ့် သူ.ရဲ.ရည်ရွယ်ချက်က ကျွန်တော်တို.ကို လက်ဝဲစွန်းကို တွန်းပို.ဖို.ဖြစ်နေတယ်”ဟု သူကပြောခဲ့သည် ။ သို.သော် အများစုက နဂိုမူလ မူကြမ်းကို သဘောမတူကြသဖြင့် အတည်မပြုနိုင်ပေ ။
ဘိုင်ဒိုင်ဟီမှပြန်လာပြီးနောက် ဤကဲ့သို.သော ဆုံးဖြတ်ချက်မျိုးတစ်ခု လိုအပ်သည်ဟု သူယူဆကြောင်း သို.သော် သဘောမတူမှု အများအပြားရှိနေခြင်းက သူ.ကို အကျဉ်းအကျပ်ထဲသို. တွန်းပို.နေကြောင်း ယောင်ဘန်းက သူ၏အတွင်းရေးမှုး ရှန်ဘိဂျင်မှတစ်ဆင့် ကျွန်တော့်အားပြောကြားလာသည် ။ ကျွန်တော်၏ ထင်မြင်ချက်ကို သူကကြားလိုနေသည် ။ ဤသို.သော ဆုံးဖြတ်အတည်ပြုချက်မျိုး အမှန်တကယ် လိုအပ်သလားဆိုသည်ကို ကျွန်တော် အမြဲလိုပင် စဉ်းစားမိကြောင်း သို.သော် ယောင်ဘန်းက လိုအပ်သည်ဟု ယုံကြည်ပါက ထောက်ခံမည်ဖြစ်ကြောင်း ကျွန်တော်ပြန်ပြောခဲ့သည် ။ ဆန်.ကျင်ဖက် ပြောဆိုမှုများနှင့်ပက်သက်၍မူ ကျွန်တော်တို.အနေဖြင့် လက်ခံနိုင်ပါက ထည့်သွင်းလက်ခံသွားပြီး ဆုံးဖြတ်ချက်ကို အတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းရန် ဆွဲဆောင်စည်းရုံးရပေမည် ။ ထို.နောက်တွင်မူ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ထောက်ခံရန် ကျွန်တော်တက်ကြွစွာပြင်ဆင်တော့သည် ။ အကြိမ်များစွာ ပြင်ဆင်တည်းဖြတ်ပြီးနောက် ဆုံးဖြတ်ချက်ကို အတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းခဲ့သည် ။
၁၂ကြိမ်မြောက်ဗဟိုကော်မတီ ဆဋ္ဌမအကြိမ် စုံညီအစည်းအဝေး၌ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ဆွေးနွေးကြသောအခါ “ပြည်သူလူထုအား ကွန်မြူနစ်စိတ်ဓာတ် ခိုင်မာစေရန် လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခြင်း”ဟူသည့်စာကြောင်း ထည့်သွင်းရန်သင့်မသင့် ဆွေးနွေးကြသည် ။ ဤအချက်သည် ကွန်မြူနစ်အတွေးအခေါ်ကို တစ်နိုင်ငံလုံးအနှံ. သင်ကြားပေးမည့် အစီအစဉ်ဖြစ်သည် ။ ဟူကျားမူနှင့် တိန်.လီကျန်တို.က ၎င်းကိုထည့်သွင်းရန် အဆိုပြုကြပြီး ချန်ယန်က သဘောတူကြောင်း မှတ်ချက်ပေးသည် ။ ယောင်ဘန်းနှင့် စာကြမ်းပြုစုရေးအဖွဲ.ဝင်ရဲဘော်များက သဘောမတူကြပေ ။ “ကွန်မြူနစ်ပညာရေး အစီအစဉ်”ကို သာမာန်ပြည်သူလူထုအတွင်း (ကွန်မြူနစ်ပါတီအတွင်း၌သာမက) လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခြင်းသည် လက်တွေ.မကျဟု သူတို.က ယူဆကြသည် ။ သို.သော်လည်း ချန်ယန်းက သဘောတူကြောင်း ထုတ်ဖော်ခဲ့ပြီးဖြစ်၍ ၎င်းမှာ ကိုင်တွယ်ရခက်သည့် အကြောင်းအရာဖြစ်နေသည် ။
စာပိုဒ်ကို ဖြုတ်ပယ်ရန်အတွက် ဥက္ကဋ္ဌကြီးမော်၏ “ဒီမိုကရေစီသစ်ဆီသို.” ဆိုသည့် စကားကို ကျွန်တော်က ကိုးကားခဲ့သည် ။ ဥက္ကဋ္ဌကြီးမော်က “ကျွန်တော်တို.ရဲ. စနစ်က ကွန်မြူနစ်စနစ်ဖြစ်တယ် ၊ သို.သော် ကျွန်တော်တို.ရဲ. လက်ရှိမူဝါဒကတော့ ဒီမိုကရေစီသစ်ဖြစ်တယ်”ဟု ပြောခဲ့သည် ။ ဤအချက်ကို ရဲဘော်ယောင်ဘန်းက သဘောတူသည် ။ ထို.ကြောင့် စာတစ်စောင်ကို ကျွန်တော်တို. ၂ယောက်ပူးတွဲလက်မှတ်ရေးထိုးကာ တိန်.ရှောင်ပင်းနှင့် ချန်ယန်းထံသို. ပေးပို.ခဲ့သည် ။ တိန်.ရှောင်ပင်းက ကျွန်တော်တို.နှင့်သဘောတူကြောင်း အလျှင်အမြန်ပင် အကြောင်းပြန်သည် ။ ထို.ကြောင့် ချန်ယန်က အပြင်းအထန် မတောင်းဆိုတော့ပေ ။ ဤနည်းဖြင့် ပြဿနာမှာ ပြေလည်သွားခဲ့သည် ။
ဤကာလအတွင်း၌ ယောင်ဘန်း၏ လုပ်ပုံကိုင်ပုံ ၊ နိုင်ငံခြားရေးရာမူဝါဒ ၊ စီးပွါးရေးမူဝါဒနှင့် ပါတီပြန်လည်ဖွဲ.စည်းရေး တို.နှင့်ပက်သက်၍ ပါတီဝါရင့်ကြီးများ၏ ဝေဖန်မှုများမှာ ပြည်သူလူထုအတွင်း ပြန်.နှံ.လာနေခဲ့သည် ။ ဤကိစ္စ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းမှာ ဘိုင်ဒိုင်ဟီတွင် ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်တို.၌ အခြေခံသည် ။ ဟူသည် ပါတီအုပ်ချုပ်မှုအပိုင်းတွင် အာရုံစိုက်မှုမရှိပဲ စီးပွါးရေး ကိစ္စရပ်များတွင် အလွန်အမင်း ပါဝင်ပက်သက်နေသည်ဟုလည်း သူတို.က ပြောကြသည် ။ ကွန်မြူနစ်ပါတီတစ်ခု၏ အထွေထွေအတွင်းရေးမှုးတစ်ယောက်သည် အရင်းရှင်နိုင်ငံများသို. အလည်အပတ်ခရီးထွက်ရန် ဤမျှအထိ စိတ်အားမထက်သန်သင့်ကြောင်း သူတို.ကပြောကြသည် ။ သူသည် ရက်အနည်းငယ်အတွင်းတွင် သာမာန်ပြည်သူများ၏ ပေးစာထောင်ပေါင်းများစွာကို အကြောင်းပြန်ခဲ့ကြောင်းနှင့် ကျေးလက်ဒေသ အများအပြားသို. ခရီးထွက်ခဲ့ကြောင်း သတင်းစာများ၏ ရေးသားချက်များကိုလည်း သူတို.ကလှောင်ပြောင်ခနဲ.ကြသည် ။
ဤသို.သောအချိန်အတွင်း၌ ယောင်ဘန်းအနေဖြင့် မည်သည့်ကိစ္စကိုမျှ မပြုလုပ်နိုင်ပေ ။ အတွင်းဝန်ရုံးအစည်းအဝေးများတွင် ယောင်ဘန်း၏ အကြံပြုချက်အများအပြားသည် ကန်.သတ်ခံနေရပြီး ဝါရင့်ကြီးများ၏ ပယ်ချမှုခံနေရသည် ။ ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်အနေဖြင့် သူအလုပ်လုပ်ရသည်မှာ များစွာခက်ခဲလာသည် ။
ရဲဘော်ရှောင်ပင်းနှင့်သူ စကားပြောဖြစ်ကြောင်း ၁၂ကြိမ်မြောက်ဗဟိုကော်မတီ ဆဋ္ဌမအကြိမ် စုံညီအစည်းအဝေးပြီးနောက် သိပ်မကြာမြင့်မှီကာလအတွင်း၌ ယောင်ဘန်းကကျွန်တော့်အားပြောကြားလာသည် ။ တိန်.က သူသည် တည်ဆဲပေါ်လစ်ဗျိူရိုကော်မတီနှင့် ဗဟိုအကြံပေးကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌနေရာများမှ နုတ်ထွက်တော့မည်ဟု ပြောသည် ။ ယောင်ဘန်းအား သူ၏နေရာကို ဆက်လက်ခံယူစေလိုပြီး အထွေထွေအတွင်းရေးမှုးနေရာကို ငယ်ရွယ်သူတစ်ဦးအား ပေးအပ်လိုသည် ။ အကယ်၍ ဤအစီအစဉ်သာ ဖြစ်မြောက်ပါက ပါတီဝါရင့်အများအပြား အနားယူကြလိမ့်မည်ဟု တိန်.ကဟူအားပြောသည် ။ ယောင်ဘန်းက ကျွန်တော့်အား အထွေထွေအတွင်းရေးမှုးနေရာ ပေးအပ်ရန် အကြံပြုခဲ့ကြောင်း အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ကျွန်တော်သည် သူ.ထက်ငယ်ရွယ်သောကြောင့်ဖြစ်ကြောင်း ပို၍ငယ်ရွယ်သည့်သူများမှာ ထိုရာထူးအတွက် အသင့်မဖြစ်သေးကြောင်းဖြင့် အကြံပြုခဲ့သည်ဟု ကျွန်တော့်အား ပြောပြသည် ။
သူအနားယူမည် မယူမည် သို.မဟုတ် ယောင်ဘန်းက မည်သည့်တာဝန်များကို ယူရမည်ဆိုသည်တို.ကို ကျွန်တော့်အား တိန်.က ဘယ်တုန်းကမှ မပြောခဲ့ဖူးသောကြောင့် ကျွန်တော့်အနေဖြင့် ထိုစဉ်က မည်သို.မျှ မှတ်ချက်မချနိုင်ခဲ့ပါ ။ အထွေထွေအတွင်းရေးမှုးရာထူးအတွက် ကျွန်တော့်အား ထောက်ခံအကြံပြုခြင်းအတွက်မူ “အသက် ၆၀နဲ.၇၀ အရွယ်ရှိနေတဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေကြားမှာ ခင်ဗျားဟာ အသင့်တော်ဆုံးလူတစ်ယောက်ဖြစ်ကြောင်း ကျွန်တော် မကြာခဏပြောခဲ့ဖူးပါတယ် ။ ခင်ဗျားနဲ.ကျွန်တော်ဟာ အသက်တူ အရွယ်တူတွေပဲလေ ၊ အဲဒီတော့ တကယ်လို. ခင်ဗျားကများ အနားယူခဲ့မယ်ဆိုရင် ကျွန်တော့်အနေနဲ. ခင်ဗျားနေရာကို ဘယ်လိုလုပ်ပြီး ဆက်ခံနိုင်မှာလဲ ။ အဲဒီလိုလုပ်ရမယ်ဆိုရင်တော့ ပိုပြီးတော့ငယ်တဲ့ တခြားတစ်ယောက်ယောက်ကို ပေးအပ်သင့်တယ်”ဟု ကျွန်တော်က ယောင်ဘန်းအားပြန်ပြောခဲ့သည် ။
“ပိုပြီးတော့ငယ်တဲ့သူတွေက ဒီရာထူးအတွက် အဆင်သင့်မဖြစ်သေးဘူးဆိုရင် အထွေထွေအတွင်းရေးမှုးနေရာအတွက် လစ်လပ်နေရာအဖြစ် စဉ်းစားလို.ရတာပဲ ။ တည်ဆဲပေါ်လစ်ဗျူရိုကော်မတီနဲ.ပေါ်လစ်ဗျူရိုတို.ကို တည်ဆဲပေါ်လစ်ဗျူရိုအဖွဲ.ဝင်တွေထဲကနေ ဥက္ကဋ္ဌနေရာကို အလှည့်ကျ တာဝန်ယူကြီးကြပ်လို.ရတာပဲ ။ ဒီနည်းအားဖြင့် ငယ်ရွယ်သေးတဲ့ ရဲဘော်တွေကို လေ့ကျင့်ပေးနိုင်တယ်”ဟုလည်း ကျွန်တော်ပြောခဲ့သည် ။
ယောင်ဘန်းက ကျွန်တော်၏ အကြံပြုချက်အား စဉ်းစားမည်ဟု ပြောသည် ။ ကျွန်တော်တို.၏ စကားဝိုင်းမှာ ပုံမှန်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ် အစည်းအဝေးဆွေးနွေးမှုမျိုးမဟုတ်သည်ကတစ်ကြောင်း ၊ တိန်.၏အကြံပြုချက်နှင့် သူကပြန်လည်ပြောပြခဲ့ပုံတို.ကို ကျွန်တော့်အား ပြန်လည်ပြောပြနေခြင်းမျှသာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်တစ်ကြောင်း ကျွန်တော်သည် ထိုအချိန်က သာမာန်ကာလျှံကာမျှသာ ပြောကြားခဲ့သည် ။ ပို၍အရေးကြီးသည့်အချက်မှာ ကျွန်တော်သည် အထွေထွေအတွင်းရေးမှုး မလုပ်လိုပဲ စီးပွါးရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုကို ကြီးကြပ်ရန်အတွက် ဝန်ကြီးချုပ်နေရာကိုသာ ဆက်လက်ရယူလိုသည့်အချက်ဖြစ်သည် ။ တိန်.ပြောသည့်အချက်တို.ကို ပြောပြနေစဉ်၌ ဟူသည် အေးဆေးတည်ငြိမ်နေပြီး စိတ်မချမ်းမသာ ဖြစ်နေသည့်ပုံမရှိပေ ။
၁၂ကြိမ်မြောက်ဗဟိုကော်မတီ ဆဋ္ဌမအကြိမ် စုံညီအစည်းအဝေးပြီးသွားပြီးနောက် ရဲဘော်ယောင်ဘန်းသည် ရွှင်လန်းတက်ကြွနေဟန်ရှိပြီး သူ၏အလုပ်အတွက် စိတ်လှုပ်ရှားနေသည့်ပုံရှိသည် ။ သူသည် ဂျန်စုပြည်နယ် ၊ ရှန်ဟိုင်းနှင့် တခြားနေရာများစွာသို. ခရီးထွက်ခဲ့သည် ။ သူသည် မိန်.ခွန်းများ ပြောကြားခဲ့ပြီး သတင်းစာများတွင် အထင်ကရ ဖော်ပြပါရှိနေသည့်အတွက် ပျော်မွေ.နေဟန်ရှိသည် ။ သူသည် တိန်.၏စကားများကို “ခေါင်းဆောင်ပိုင်းကို သွေးသစ်လောင်းရန်”အတွက် အဆိုပြုမှုအဖြစ် သာမာန်မျှသာ ယူဆနေ၍ တိန်.ကအနားယူမည် ၊ သူကတိန်.၏လက်ရှိနေရာကို ဆက်ခံရယူကာ တခြားပါတီဝါရင့်ကြီးများ အများအပြားလည်း အနားယူသွားလိမ့်မည်ဟု ရိုးစင်းစွာ အဓိပ္ပါယ်ကောက်ယူနေသည်ဟု ကျွန်တော်ခံစားမိသည် ။ သူ.အပေါ်ထားရှိသည့် တိန်.၏သဘောထားများ အခြေခံကျကျပြောင်းလဲသွားသည်ကို သတိမပြုမိသောကြောင့် ဤသို.အဓိပ္ပါယ်ကောက်ယူဆနေခြင်းလည်း ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါသည် ။
၁၉၈၆ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလအတွင်း၌ မြို.ကြီးပေါင်းများစွာတွင် ကျောင်းသားဆန္ဒပြပွဲများ ပေါ်ပေါက်လာသည် ။ ရှန်ဟိုင်းတွင် သူတို.၏ အင်အားမှာ အလွန်ပင်များပြားလှသည် ။ လမ်းပေါ်ဆန္ဒပြပွဲများသာမက ဆန္ဒပြသူများသည် မြူနီစီပါယ် အစိုးရအဆောက်အအုံများကိုပါ ဝင်ရောက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ကြသည် ၇ ။
ဤအဖြစ်အပျက်က တိန်.ရှောင်ပင်းကို တုန်လှုပ်သွားစေခဲ့သည် ။ ဒီဇင်ဘာ ၃၀ ရက်နေ.၌ သူက ယောင်ဘန်း၊ ဝမ်လီ၊ ဟူကျိလီ၊ လီပင်း၊ ပညာရေးဝန်ကြီး ဟေဒုန်ချန်းနှင့် ကျွန်တော်တို.ကို သူ၏နေအိမ်သို. ဆင့်ခေါ်၍ ကျောင်းသားဆန္ဒပြမှုများအကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့သည် ။ “မကြာခင်က ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ ကျောင်းသားဆန္ဒပြပွဲတွေဟာ သူ.အလိုလိုဖြစ်လာတာမဟုတ်ဖူး ။ ဒါတွေဟာ ဘူဇွာလစ်ဘရယ်ဝါဒကို တင်းတင်းကျပ်ကျပ် မထိန်းချုပ်ခဲ့ခြင်းရဲ. ရလာဒ်တွေပဲ”ဟု သူကပြောသည် ။ သူက အစိုးရဆန်.ကျင်သူ နက္ခတ္တရူပဗေဒပညာရှင် ဖန်လီကျီနှင့် လစ်ဘရယ်စာရေးဆရာ ဝမ်ရူဝန်တို.၏နာမည်ကို ထုတ်ဖော်ပြောကြားပြီး ဝမ်ရူဝန်အား ပါတီမှ မထုတ်ပယ်ခဲ့ခြင်းအတွက် ယောင်ဘန်းအား ပြစ်တင်ဝေဖန်ခဲ့သည် ။ ဤသို.လုပ်ဖို. ယောင်ဘန်းအား ကာလရှည်ကြာစွာကတည်းကပင် ပြောကြားခဲ့သည် ၊ အဘယ့်ကြောင့် မလုပ်ခဲ့သနည်း ။ ဆန္ဒပြပွဲများနှင့်ပက်သက်၍မူ အာဏာရှင်ဆန်ဆန်နည်းလမ်းများကို သုံးပင်သုံးရပါစေ ၎င်းတို.ကို ငြိမ်သက်သွားအောင် ပြတ်ပြတ်သားသား အရေးယူဆောင်ရွက်ရမည်ဟု သူက အဆိုပြုခဲ့သည် ။
တကယ်တမ်း၌ တိန်.သည် ကျောင်းသားဆန္ဒပြပွဲများနှင့်ပက်သက်၍ တာဝန်အားလုံးကို ယောင်ဘန်းအပေါ်သို. ပုံချနေခြင်းဖြစ်သည် ။ ဤစိတ်လှုပ်ရှားပေါက်ကွဲမှုက လစ်ဘရယ်ဝါဒနှင့်ပက်သက်၍ သူနှင့်ဟူအကြားက ပို၍ နက်ရှိုင်းလာသည့် သဘောထားကွဲလွဲမှုကို ဖော်ပြနေခြင်းဖြစ်သည် ။ တိန်.၏မိန်.ခွန်းကို ချက်ချင်းပင်ပုံနှိပ်လိုက်ပြီး အုပ်ချုပ်ရေးဋ္ဌာန အဆင့်ဆင့်သို. ဖြန်.ချိခဲ့သည် ။ ထို.ကြောင့် ဤကိစ္စကို လူအများအပြား သိရှိခဲ့ကြသည် ။
ဇန်နဝါရီလ ၄ရက်နေ.၌ တိန်.၏နေအိမ်သို. အစည်းအဝေးတစ်ခုတက်ရောက်ရန် ဆင့်ခေါ်စာတစ်စောင် ကျွန်တော်ရရှိခဲ့သည် ။ နံနက် ၁၀နာရီခန်.တွင် ကျွန်တော်ရောက်သွားချိန်၌ ချန်ယန်း ၊ ဝမ်လီ ၊ ယန်ရှန်ကွမ်း ၊ ဘိုယိဘို ၊ ဝမ်ဇန်းနှင့် ပန်ဇန်းတို. ရောက်ရှိနေကြပေပြီ ။ လူအားလုံးစုံသွားသည့်အခါ၌ ကျွန်တော်တို.ကို ပြသရန် တိန်.က စာတစ်စောင်ကို ဆွဲထုတ်လိုက်သည် ။
စာမှာ ယောင်ဘန်း၏ နှုတ်ထွက်စာဖြစ်ပြီး တိန်.ထံသို. လိပ်မူထားသည် ။ စာပါအကြောင်းအရာမှာ သူ(ဟူယောင်ဘန်း)သည် ဦးဆောင်မှုပြုလုပ်ရာ၌ အဆင်ခြင်နည်းပါးခဲ့ကြောင်း ၊ ပြည်တွင်းပြည်ပ အကြောင်းအရာများနှင့်ပက်သက်၍ မိုက်မဲသည့် အမှားအယွင်းများ ပြုလုပ်မိခဲ့ကြောင်း ရေးသားထားသည် ။ သို.သော် သူအဓိကထားရေးသားထားသည်မှာ သူသည် အခြေခံမူ ၄ချက်ကို ထိန်းသိမ်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့် လစ်ဘရယ်ဝါဒ ဆန်.ကျင်ရေးတို.တွင် အားနည်းပျော့ညံ့ခဲ့ကြောင်း ၊ သူ၏သဘောထားမှာ မပြတ်သားခဲ့ကြောင်း ထို.ကြောင့် လစ်ဘရယ်ဝါဒ ရေစီးကြောင်း ပျံ.နှံ.လာခဲ့ပြီးလျှင် သူသည် လူယုတ်မာတချို.ကို အကာအကွယ်ပေးသလိုဖြစ်ခဲ့ကြောင်းဖြင့် ရေးသားဖော်ပြထားသည် ။ သူပြုလုပ်ခဲ့သည့် အမှားအယွင်းများမှာ ဆိုးရွားလှသဖြင့် သူ၏အတွေးအခေါ်ကို ပြန်လည်သုံးသပ်ရန်နှင့် ပါတီသို. အစီရင်ခံတင်ပြနိုင်ရန်အတွက် သူ.အားနှုတ်ထွက်ခွင့် ပြုပါရန် ဖော်ပြထားသည် ။
အစည်းအဝေးတက်ရောက်လာသူအားလုံး စာကိုဖတ်ပြီးသွားချိန်၌ နှုတ်ထွက်စာကို လက်ခံသင့်သည်ဟု တိန်.ကပြောသည် ။ မည်သူကမျှ မကန်.ကွက်ကြပေ ။ ယောင်ဘန်း ရာထူးမှနှုတ်ထွက်ပြီးချိန်၌ ကျောက်ကျိယန် ၊ ဘိုယိဘို၊ ယန်ရှန်ကွမ်းနှင့် ဝမ်လီတို.သည် တည်ဆဲပေါ်လစ်ဗျူရိုကော်မတီကို ၁၃ကြိမ်မြောက် ပါတီကွန်ဂရက် ကျင်းပချိန်အထိ ဦးဆောင်သွားရန် တိန်.ကပြောကြားခဲ့သည် ။ ဟူကျားမူသည် အတွင်းဝန်ရုံး၏ နေ.စဉ်အရေးအရာများကို စီမံခန်.ခွဲနေသည့် လက်ရှိအတွင်းရေးမှုးဖြစ်သောကြောင့် သူ.အားထည့်သွင်းသင့်ကြောင်း ကျွန်တော်က အကြံပြုရာ တိန်.က သဘောတူလက်ခံသည် ။
ထိုသို.ဖြင့် ကျွန်တော်ဦးဆောင်သည့် ငါးဦးအဖွဲ. ပေါ်ပေါက်လာပြီးလျှင် ၁၃ကြိမ်မြောက်ပါတီကွန်ဂရက်ထိတိုင် တည်ဆဲပေါ်လစ်ဗျူရိုကော်မတီ၏ နေ.စဉ်ကိစ္စအဝဝကို စီမံခန်.ခွဲခဲ့သည် ။ ယောင်ဘန်း၏ ကိစ္စနှင့်ပက်သက်၍မူ ပျော့ပျောင်းသည့် နည်းလမ်းများကို အသုံးပြုနိုင်သည်ဟု တိန်.ကပြောသည် ။ ပြည်တွင်းပြည်ပ အကျိုးသက်ရောက်မှုများကို လျှော့ချနိုင်ရန်အတွက် သူ၏ တည်ဆဲပေါ်လစ်ဗျူရိုကော်မတီအဖွဲ.ဝင်အဖြစ် တည်ရှိမှုကို ဆက်လက်ထားရှိနိုင်သည် ။ ယောင်ဘန်း၏ ကိစ္စအား ဝေဖန်ဆန်းစစ်ရန်နှင့်ပြုပြင်ဆုံးမရန်အတွက် ဗဟိုအကြံပေးအဖွဲ.အနေဖြင့် ပါတီတွင်းဝေဖန်ဆန်းစစ်ရေး အစည်းအဝေး ခေါ်ယူနိုင်ပြီးလျှင် သူ၏နှုတ်ထွက်ခြင်းအား ဗဟိုကော်မတီစုံညီအစည်းအဝေးတွင် ကြေညာမည့်အစား အကျယ်ချဲ.ပေါ်လစ်ဗျူရို အစည်းအဝေးတွင် ကြေညာရန်လည်း သူကပြောကြားခဲ့သည် ။
စုံညီအစည်းအဝေးမပြုလုပ်ခြင်း၏ အကြောင်းရင်းမှာ လူအများ၏ အံ့ဩတုန်လှုပ်မှုကို လျှော့ချရန်နှင့်ပျော့ပျောင်းသည့် နည်းလမ်းများကို အသုံးပြုနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ခြင်းဖြစ်ပြီး နှုတ်ထွက်လွှာကို အတည်မပြုနိုင်မှာ စိုးရိမ်သောကြောင့်မဖြစ်နိုင်ဟု ထိုစဉ်က ကျွန်တော်ယုံကြည်ခဲ့သည် ။ တကယ်တမ်းတွင် ဤလုပ်နည်းလုပ်ဟန်မှာ ပါတီစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် ကိုက်ညီမှုမရှိသည်မှာ အမှန်ပင်ဖြစ်သည် ။ သို.သော် သူ၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ ပြဿနာကို အညင်သာဆုံး ဖြေရှင်းလိုခြင်းဖြစ်သည် ။ တိန်.ပြောသည့်အချက်နှင့်ပက်သက်၍ မည်သည့်ရဲဘော်ကမျှ ကွဲပြားသည့်အမြင်များ ထုတ်ဖော်ပြောကြားခြင်းမပြုခဲ့ပေ ။
အစည်းအဝေးတွင် ချန်ယန်းသည် တခြားသူအားလုံးထက်ပို၍ တက်ကြွနေခဲ့သည် ။ သူသည် အဖွဲ.အစည်း၏ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ပို၍အာရုံစိုက် စိုးရိမ်နေဟန်ရှိသည် ။ အထွေထွေအတွင်းရေးမှုး၏ နှုတ်ထွက်လွှာကို ပေါ်လစ်ဗျူရိုအစည်းအဝေးတွင် လက်ခံအတည်ပြုခြင်းနှင့်ပက်သက်၍ ပြည်တွင်းနှင့်နိုင်ငံတကာမှ ဝေဖန်မှုများ ပြုလုပ်မည်ကို သူကစိုးရိမ်နေသည် ။ ထို.ကြောင့် ဤအချက်ကို သူကထောက်ပြပြီး ၎င်းသည်တရားဝင်၍ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် ကိုက်ညီကြောင်း ကြေညာချက်ထုတ်ဖို. ပြောဆိုသည် ။
တိန်.ကိုယ်တိုင်ကမူ ဤကဲ့သို.သော ကိစ္စများကို ဘယ်တုန်းကမှ အလေးအနက်မထားခဲ့ပေ ။ ယောင်ဘန်း၏ ကိစ္စကို ကိုင်တွယ်ပုံနှင့်ပက်သက်၍ (အထူးသဖြင့် ဗဟိုကော်မရှင်၏ ပါတီတွင်းဝေဖန်ဆန်းစစ်ရေး အစည်းအဝေး၌ သူ.အား ဝေဖန်ရှုတ်ချမှုများနှင့်ပက်သက်၍) ခေါင်းဆောင်မှု အပြောင်းအလဲပြုလုပ်ရာတွင် တရားမဝင်သည့် နည်းလမ်းများကို ကျင့်သုံးခဲ့သည်ဟု ပြည်တွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာမှ ဝေဖန်မှုများ အမှန်တကယ်လည်း ပေါ်ထွက်ခဲ့သည် ။
တိန်.ရှောင်ပင်း၏ နေအိမ်အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့် ကာလအတွင်း၌ ပါတီဝါရင့်ကြီး လီရှန်နင်းသည် ရှန်ဟိုင်းတွင်ရောက်နေသည် ။ အစည်းအဝေးအပြီး၌ သူ.အားအကြောင်းကြားရန်နှင့် သူ.အမြင်ကို တောင်းခံရန် တိန်.ရှောင်ပင်းက ယန်ရှန်ကွမ်းအား ရှန်ဟိုင်းသို. ချက်ချင်းပင် စေလွှတ်ခဲ့သည် ။ မည်သို.ဖြစ်ပျက်ခဲ့ကြောင်း ယန်ရှန်ကွမ်းက လီရှန်နင်းအား ရှင်းလင်းပြောကြားပြီးချိန်၌ အဆုံးအဖြတ်နှင့်ပက်သက်၍ လီက လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ကျေနပ်အားရစွာ ထောက်ခံသည် ။ သူ.အဖို.မှာကား အိပ်မက်တစ်ခု လက်တွေ.အကောင်အထည်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။ “ဒီကောင် အသုံးမကျဘူးဆိုတာကို တစ်လျှောက်လုံး ကွန်တော်သိနေခဲ့တယ်”ဟု သူက ယန်အားပြောသည် ။
သူက ဟူသည် ကျလောက်အောင်အပြောကောင်းပြီး ပရိယာယ်ကြွယ်သည်ဟုလည်း ပြောသေးသည် ။ မကြာသေးမှီကာလအတွင်းက ရှန်ဟိုင်းသို. ယောင်ဘန်းရောက်လာခဲ့ရာ ၊ သူ.အားတွေ.ဆုံခွင့်ရရန် လီကတောင်းပန်ခဲ့ကြောင်း သို.သော် ယောင်ဘန်းသည် သူ၏တောင်းဆိုမှုအား ငြင်းပယ်ရဲသည်အထိ သတ္တိကောင်းကြောင်း လီကပြောသည် ။ လီသည် ဟူအပေါ်သူ၏ မကျေနပ်ချက်များအား ဆက်လက်ပေါက်ကွဲနေခဲ့သည်။ ကျွန်တော့်အား အထွေထွေအတွင်းရေးမှုးအဖြစ် ခေတ္တခန်.အပ်မည့်ကိစ္စနှင့်ပက်သက်၍လည်း သူက သဘောတူသည် ။ သို.သော် “ကျိယန်ဟာ နိုင်ငံခြားအတွေးအခေါ်တွေ အများကြီးရှိနေတယ် ။ ဒီလိုဆက်ပြီးစခန်းသွားမယ်ဆိုရင်တော့ လက်မခံနိုင်ဘူး ။ ဒီအကြောင်းသူ.ကိုပြောလိုက်ပါ”ဟု သူက ယန်ရှန်ကွမ်းအား ပြောခဲ့သည် ။
၁၉၈၇ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၇ ရက်နေ.တွင် ဘိုယိဘို ၊ ယန်ရှန်ကွမ်း ၊ ဝမ်လီ ၊ ဟူကျိလီနှင့် ကျွန်တော်တို.သည် ငါးဦးအဖွဲ.၏ ပထမဆုံးအကြိမ် အစည်းအဝေးကို ကျင်းပခဲ့ပြီး ပါတီတွင်းဝေဖန်ဆန်းစစ်ရေး အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးရမည့် အကြောင်းအရာများကို ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခဲ့ကြသည် ။ ကျွန်တော်တို.သည် ပါတီတွင်းဝေဖန်ဆန်းစစ်ရေး အစည်းအဝေးတွင် ဝေဖန်ကြမည့်အကြောင်းအရာများ၏ လေသံကို တတ်နိုင်သမျှ အပျော့ပျောင်းဆုံး ဝေဖန်သွားကြရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည် ။
ထိုစဉ်က ပန်ဇန်း ၊ ဘိုယိဘိုနှင့် တခြားပါတီဝါရင့်ကြီးများက ဟူအား “လူငယ်ဂိုဏ်း၈”ဟုခေါ်သည့် “အုပ်စု”ကို ရာထူးတိုးပေး မြှင့်တင်ပေးသည်ဟု စွပ်စွဲလိုနေကြသည် ။ ဤအချက်မှာ မပြုလုပ်သင့်ဟု ကျွန်တော်ယူဆသည် ။ ဤသို.စွပ်စွဲခြင်း၏ အကျိုးဆက်များမှာ ပြင်းထန်ဆိုးရွားနိုင်ပြီး လူအများအား အဖွဲ.အစည်းများနှင့် ပက်သက်ငြိစွန်းသည့်အတွက် မလုံခြုံသည့် ခံစားချက်မျိုးပျံ.နှံ.သွားနိုင်သည် ။ ကျွန်တော်၏ စိုးရိမ်ပူပန်မှုကို တင်ပြသည့်အခါ၌ အားလုံးက သူတို.၏ သဘောတူညီချက်ကို ပြသကြသည် ။ ထို.ကြောင့် “လူငယ်အဖွဲ.ချုပ်ဂိုဏ်း”နှင့် “ကေဒါအစုအဖွဲ.”အကြောင်းကို မဆွေးနွေးကြရန် ကျွန်တော်တို. သဘောတူခဲ့ကြသည် ။
ပါတီတွင်း ဝေဖန်ရေး အစည်းအဝေးမတိုင်မှီည၌ အစည်းအဝေးကို မည်သို.ပြုလုပ်မည်ဟု ပြောကြားရန် ယောင်ဘန်း၏နေအိမ်သို. ကျွန်တော်သွားရောက်ခဲ့သည် ။ တိန်.၏နေအိမ်၌ မည်သို.မည်ပုံ ဆွေးနွေးခဲ့သည့်အကြောင်းနှင့် သူ.အား တည်ဆဲပေါ်လစ်ဗျူရို ကော်မတီဝင်အဖြစ် ဆက်လက်တည်ရှိနေစေမည်ဖြစ်ကြောင်းတို.ကိုလည်း ကျွန်တော်က ပြောကြားခဲ့သည် ။
မေးခွန်းတချို.ကိုလည်း ကျွန်တော်က မေးမြန်းခဲ့သည် ။ “လစ်ဘရယ်ဝါဒ ဆန်.ကျင်ရေးနဲ.ပက်သက်ပြီး တိန်.က အကြိမ်များစွာ ခင်ဗျားကို သတိပေးခဲ့ပါတယ် ။ ခင်ဗျားက အဲဒါတွေကို ဘာဖြစ်လို. အလေးအနက်မထားခဲ့တာလဲ ။ တမင်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ. ခင်ဗျား တိန်.နဲ.ခပ်ခွါခွါနေခဲ့တာလား”ဟု ကျွန်တော်က မေးခဲ့သည် ။ သူ.အတွက် ဘယ်တုန်းကမှ ဤသို.မဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြောင်း သူကပြန်ပြောသည် ။
“ခင်ဗျားရဲ.နုတ်ထွက်စာကို ကြေငြာလိုက်ရင် ခင်ဗျားကို ထောက်ခံတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ. လူတချို.က ဒုက္ခပေးလာနိုင်တယ်နော်”ဟုလည်း ကျွန်တော်ပြောခဲ့သေးသည် ။ ဤသို.သော ဖြစ်ရပ်မျိုးပေါ်ပေါက်လာနိုင်သည်ဟု ကျွန်တော် အမှန်ပင်ယုံကြည်ထားသည် ။ ထို.ကြောင့် သူ.အနေဖြင့် ဤအချက်ကို သတိပြုမိရန်နှင့် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားစေလိုခဲ့သည် ။
ပါတီဖက်မှ ပြတ်ပြတ်သားသား ရပ်တည်မည်ဟု သူက ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့သည် ။ ပါတီတွင်း ဝေဖန်ရေး အစည်းအဝေး၌ ဤစကားဝိုင်းတွင် ဆွေးနွေးခဲ့သည့် အကြောင်းအရာအားလုံးကို ကျွန်တော်က ပြန်လည်အစီရင်ခံခဲ့သည်။
ပါတီတွင်း ဝေဖန်ရေး အစည်းအဝေးကို ဇန်နဝါရီလ ၁၀ရက်နေ.တွင် ဗဟိုအကြံပေးကော်မရှင် အစည်းအဝေးအမည်ဖြင့် ပြုလုပ်ခဲ့သည် ။
ဘိုယိဘိုက အစည်းအဝေး၏ သဘာပတိအဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ၆ရက်ဆက်တိုက် မနက်ခင်းတိုင်း ပြုလုပ်ခဲ့သည် (ထိုအထဲတွင် တစ်နေကုန်စည်းဝေးခဲ့သည့် တစ်ရက်ပါ အပါအဝင်ဖြစ်သည်)။ အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူများမှာ ဗဟိုအကြံပေးကော်မရှင်အဖွဲ.ဝင်များ ၊ တည်ဆဲပေါ်လစ်ဗျူရို အဖွဲ.ဝင်များ ၊ အတွင်းဝန်များရုံးမှ အတွင်းရေးမှုးများ ၊ နိုင်ငံတော်ကောင်စီဝင်များ ၊ အမျိုးသား ပါတီကွန်ဂရက်မှ ပါတီကော်မရှင် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ၊ တရုတ်ပြသည်သူ. နိုင်ငံရေးရာ အတိုင်ပင်ခံကွန်ဖရင့် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ၊ ဗဟိုစစ်ကော်မရှင် ဋ္ဌာနခွဲအသီးသီးမှ ဋ္ဌာနမှုးများနှင့် ဗဟိုကော်မတီအောက်ရှိ ဝန်ကြီးအသီးသီးတို. တက်ရောက်ကြသည် ။ တိန်.ရှောင်ပင်းနှင့် ချန်ယန်းတို. တက်ရောက်ခြင်းမရှိပေ ။ လီရှန်နင်းက ရှန်ဟိုင်းတွင်ရောက်နေသည် ။
တိန်.လီကျန်က ရှည်လျှားလှသည့် မိန်.ခွန်းရှည်ကြီးကို ပြောကြားပြီး တိန်.ရှောင်ပင်း၏ လမ်းညွှန်ချက်များကို မလိုက်နာခဲ့ခြင်းနှင့် ဘူဇွာလစ်ဘရယ်ဝါဒနှင့်ပက်သက်၍ နှစ်ကာလရှည်ကြာစွာ လျော့တိလျော့ရဲ ကိုင်တွယ်ခဲ့ခြင်း သို.မဟုတ် အားပေးအားမြှောက်ပင် ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်း စသည့်အချက်များကို ထောက်ပြပြီး ယောင်ဘန်းအား စနစ်တကျ ဝေဖန်ခဲ့သည်။ တခြားမိန်.ခွန်းများသည်လည်း ပါတီ၏ အစဉ်အလာပုံစံအတိုင်းသာဖြစ်၍ ကွဲပြားသည့် ရှုထောင့်အမျိုးမျိုးမှ ဟူအားဝေဖန်ခဲ့ခြင်းသာဖြစ်သည်။ ဗဟိုစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးကော်မရှင်၏ ဒုတိယအတွင်းရေးမှုး ဝမ်ဟေရှောင်က ဟူ၏နေအိမ်သို. သူသွားရောက်ခဲ့စဉ်က ယောင်ဘန်းသည် လွန်စွာစိတ်ပျက်နေပြီး ပါတီဝါရင့်ကြီးတချို.က သူ.အားတိုက်ခိုက်ရန် ပြင်ဆင်နေကြကြောင်း မကျေမနပ်ကန်.ကွက် ပြောကြားခဲ့သည်ဟု ဖွင့်ပြောသည်။ ဤအစည်းအဝေးကို မတင်းလွန်းမလျှော့လွန်း ပုံမှန်လေသံဖြင့် ကျင်းပရန် ရည်ရွယ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည် ၊ သို.သော် ဝမ်ဟေရှောင်က ဤသို.ပြောကြားလိုက်သည့်အချိန်၌ အခြေအနေမှာ တင်းမာလာသည်။ ကျွန်တော်တို.က ချက်ချင်းပင် ဝမ်ဟေရှောင်အား ဤကိစ္စကို ဆက်လက်မပြောကြားရန် သတိပေးခဲ့သည်။ ကံကောင်းထောက်မစွာပင် ဤသို.သူပြောသည့်အချိန်၌ ပါတီဝါရင့်ကြီးတချို. အစည်းအဝေးတွင် ရှိမနေခဲ့ပေ။
အစည်းအဝေးအတွင်း ဝေဖန်ချက်များအနက် အံ့ဩစရာအကောင်းဆုံးဝေဖန်ချက်မှာ ဩဇာတိက္ကမကြီးမားသည့် ဝါရင့်စစ်ပြန်ကြီး ယူကျိလီ၏ ဝေဖန်ချက်ဖြစ်သည်။ ယောင်ဘန်းနှင့် ယူကျိလီတို.မှာ ထိုစဉ်ကာလများအတွင်းက အလွန်ရင်းနှီးကြသည်။ ၁၂ကြိမ်မြောက် ပါတီကွန်ဂရက်အတွက် ပြင်ဆင်သည့်အချိန်က ဟူယောင်ဘန်းသည် ယူကျိလီအား ခေါင်းဆောင်မှု အနေအထားကို ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရေးအတွက် ကြီးကြပ်သူအဖြစ် တာဝန်ပေးခဲ့ဖူးသည်။ ကျွန်တော်သည် ထိုစဉ်အချိန်က နိုင်ငံတော်ကောင်စီတွင် ရှိနေပြီး ထိုသို.သော ကိစ္စရပ်များကို မကိုင်တွယ်ခဲ့ရပေ။ ၁၂ကြိမ်မြောက် ပါတီကွန်ဂရက်အတွက် ခေါင်းဆောင်မှုအစီအစဉ်ကို ကြီးကြပ်ရန်အတွက် ယူကျိလီအား အဘယ့်ကြောင့် ကြီးကြပ်သူအဖြစ် တာဝန်ပေးအပ်ခဲ့သည်ကို ကျွန်တော်မသိပါ ၊ သို.သော် ဤအချက်က ဟူသည် ယူကျိလီအား မည်မျှယုံကြည်အားကိုးကြောင်း ပြသနေသည်။ ထိုစဉ်ကာလများအတွင်းက ယောင်ဘန်းသည် ယူကျိလီနှင့်အတူ နယ်စပ်ဒေသများသို. သွားရောက်ခြင်း ၊ စစ်တပ်များအား စစ်ဆေးခြင်းတို.ကို ပြုလုပ်ရုံသာမက ယူသည် စစ်တပ်ထဲ၌ ရှိနေပြီး နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ ဋ္ဌါနခွဲ၏ ညွှန်ကြားရေးမှုးချုပ်လည်း ဖြစ်သည့်အားလျော်စွာ သူတို.နှစ်ဦးသည် စက်ရုံများနှင့် ရေနံတွင်းများသို. အတူသွားရောက်စစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။ အတွင်းဝန်များ၏ အစည်းအဝေးများ၌ စီးပွါးရေးနှင့်ပက်သက်သည့် ကိစ္စရပ်များတွင် ယောင်ဘန်းသည် ယူကျိလီ၏ အကြံဥာဏ်များကို မကြာခဏဆိုသလို မေးမြန်းရယူခဲ့ပြီး သူ၏အယူအဆများအား ချီးမွမ်းခဲ့သည်။ စီးပွါးရေးနှင့်ပက်သက်သည့် ကိစ္စရပ်များ၌ ဟူအတွက် ထောက်ခံမှုရရှိရန် အခက်အခဲများ ရှိကောင်းရှိနေပေမည် ၊ ယူ၏ အယူအဆများမှာ သူ၏အယူအဆများနှင့် အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်သည် ။ ထို.ကြောင့် ယူကျိလီ၏ မှတ်ချက်များအား သူ၏အယူအဆကို ဖော်ပြရန်အတွက် အသုံးချခဲ့ပြီး အများစု၏ ထောက်ခံမှုကို ရရှိအောင် ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ သူတို.၏ ဆက်ဆံရေးမှာ အလွန်ပင် ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ခဲ့ကြသည်။
သို.သော်လည်း ပါတီတွင်း ဝေဖန်ဆန်းစစ်ရေး အစည်းအဝေးတွင် ယူကျိလီသည် ယောင်ဘန်းအား အပြင်းအထန် ဆန်.ကျင်ဝေဖန်သည့် မိန်.ခွန်းတစ်ခုကို ထင်မှတ်မထားပဲ ပြောကြားခဲ့သည်။ တိန်.နှင့် ပါတီဝါရင့်ကြီးများ နှုတ်ထွက်အနားယူခြင်းနှင့်ပက်သက်သည့် ယောင်ဘန်း၏ မှတ်ချက်စကားများကို စုစည်း၍ “ဘာရည်ရွယ်ချက်နဲ. ခင်ဗျားပြောခဲ့တာလဲ” ၊ “ဘာဖြစ်လို. ခင်ဗျားပြောခဲ့တာလဲ” စသည်ဖြင့် စွပ်စွဲသည့်လေသံဖြင့် မေးမြန်းခဲ့သည်။
ထို.ကြောင့် ယူကျိလီသည် သာမာန်ပုံမှန်အခြေအနေမျိုး၌ ရိုးသားသည့်အသွင်ဆောင်နေသော်လည်း အကျဉ်းအကျပ်အခြေအနေမျိုး၌မူ သူ.ကိုယ်သူကာကွယ်ရန်အတွက် နောက်ကျောကို ဓားနှင့်ထိုးမည့်သူမျိုးဖြစ်ကြောင်း သူ.ကိုယ်သူထုတ်ဖော်ပြသလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် သူ၏သဘာဝအမှန်ကို ပြိုင်စံရှားလောက်အောင် ထုတ်ဖော်လှစ်ဟပြလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ သူတို.နှစ်ဦးသည် အလွန်ပင် ရင်းရင်းနှီးနှီးရှိခဲ့သည် ၊ ထို.ကြောင့် အကယ်၍ တိန်.က ယောင်ဘန်းနှင့် လမ်းခွဲပြီး သူ.အား ရာထူးမှထုတ်ပစ်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါက ၊ အကယ်၍ သူ(ယူ)သည် ယောင်ဘန်းနှင့် နီးစပ်သူဖြစ်သည်ဟု ရှုမြင်ခံရပါက သူသည်လည်း ငြိစွန်းသွားနိုင်သည်ဟု သူ.အနေဖြင့် ခံစားကောင်းခံစားမိပေမည်။ ထို.ကြောင့် သူ.ကိုယ်သူ အလွတ်ရုန်းထွက်ရန် အခွင့်အရေးတစ်ခုအဖြစ် အသုံးချခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ပါတီတွင်း ဝေဖန်ဆန်းစစ်ရေး အစည်းအဝေး၏ အဆုံးတွင် ယောင်ဘန်းက သူ.ကိုယ်သူဝေဖန်သည့် မိန်.ခွန်းတစ်ခုကို ပြောကြားပြီး နိုင်ငံရေးအရ ပြင်းထန်သည့် အမှားအယွင်းများကို ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း ဝန်ခံခဲ့သည်။ သူ.မိန်.ခွန်း၏ နောက်ဆုံးပိုင်းအရောက်၌ သူသည် အလွန်ပင် စိတ်လှုပ်ရှားခဲ့ပြီး ပေါ်ပေါ်ထင်ထင်ပင် ငိုကြွေးခဲ့သည်။
ယောင်ဘန်း၏ နှုတ်ထွက်စာကို ဇန်နဝါရီလ ၁၆ ရက်နေ.တွင် ကျင်းပသည့် ပေါ်လစ်ဗျူရို အစည်းအဝေးတွင် တက်ရောက်သူများမှ လက်ထောင်၍ ပြောင်မဲပေးခြင်းဖြင့် အတည်ပြုခဲ့သည် ။ ယာယီအထွေထွေအတွင်းရေးမှုးအဖြစ် ကျွန်တော့်အားခန်.အပ်ခဲ့သည် ။ အသက်ခြောက်ဆယ်နှင့်ခုနှစ်ဆယ် အသက်အရွယ် အုပ်စုအတွင်း၌ ဟူယောင်ဘန်းသည် အထွေထွေအတွင်းရေးမှုးအဖြစ် အသင့်တော်ဆုံးသူဖြစ်ကြောင်း ဇန်နဝါရီလ ၄ ရက်နေ. တိန်.၏နေအိမ်တွင် ပြုလုပ်သည့် အစည်းအဝေးနှင့် ပေါ်လစ်ဗျူရို အစည်းအဝေး နှစ်ခုလုံး၌ အကြိမ်များစွာပင် ကျွန်တော်က ပြောဆိုခဲ့သော်လည်း ယောင်ဘန်း၏ နှုတ်ထွက်မှုကို လက်ခံရန်ဆုံးဖြတ်ခြင်း၌မူ ကျွန်တော် မကန်.ကွက်ခဲ့ပေ ။ သို.သော် ကျွန်တော်သည် ယာယီအထွေထွေအတွင်းရေးမှုး ရာထူးနှင့်မူ မသင့်တော်ကြောင်းနှင့် ပို၍သင့်တော်မည့် သူတစ်ယောက်ကို အမြန်ဆုံး ရှာဖွေနိုင်မည်ဟု မျှော်လင့်ကြောင်း ကျွန်တော်ပြောကြားခဲ့သည် ။ အစည်းအဝေး ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ကျွန်တော် မငြင်းဆိုခဲ့ပေ ။
ဤသို.မငြင်းဆိုရခြင်း၏ အကြောင်းများမှာ ပထမအချက်အနေဖြင့် တိန်.နှင့် ပါတီဝါရင့်ကြီးများသည် ဤကိစ္စနှင့်ပက်သက်၍ ၁၉၈၆ခုနှစ် နွေရာသီကပင် ဆုံးဖြတ်ထားပြီးဖြစ်သည် ။ ဤဆုံးဖြတ်မှုတွင် ကျွန်တော်မပါဝင်ခဲ့သော်လည်း ဤကိစ္စကို ကျွန်တော်သိပြီးဖြစ်သည် ။ ထို.အပြင် ရှေ.၌ကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပင် တိန်.သည် ယောင်ဘန်းနှင့် ပြောဆိုခဲ့ပြီးဖြစ်၍ ယောင်ဘန်းကလည်း သူ.အားတိန်.က ရာထူးမှဖယ်ရှားခြင်း၏ အကြောင်းရင်းမှန်ကို မသိသော်လည်း လက်ခံခဲ့ပြီးဖြစ်သည် ။ တနည်းအားဖြင့်ဆိုရပါက ဟူသည် နောက်ဆုံး၌ ရာထူးမှ ဆင်းပေးရမည်သာဖြစ်ပြီး ထင်ထားသည်ထက်ပို၍ လအနည်းငယ်စောစီးစွာ ဤကိစ္စဖြစ်ပွါးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည် ။
ဒုတိယအချက်မှာ ကျောင်းသားဆန္ဒပြမှုများနှင့်ပက်သက်၍ ဒီဇင်ဘာလ ၃၀ရက်နေ.၌ တိန်.၏မှတ်ချက် ထွက်ပေါ်လာပြီးနောက်ပိုင်း၌ ယောင်ဘန်းအနေဖြင့် ဆက်လက်၍ အလုပ်လုပ်ဖို. မဖြစ်နိုင်တော့ပေ ။ ရှေ.၌ ကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပင် ၁၉၈၆ခုနှစ် နွေးရာသီနောက်ပိုင်း၌ ယောင်ဘန်းအနေဖြင့် ဗဟိုကော်မတီ၏ လုပ်ငန်းများကို စီမံခန်.ခွဲရန် ခက်ခဲလာသည် ။ ပါတီဝါရင့် အများအပြားက သူ၏စကားများကို ဂရုမထားကြတော့ပေ ။ အထူးသဖြင့် ကျောင်းသားတို.၏ မငြိမ်မသက်မှုများအား ဘူဇွာလစ်ဘရယ်လှုပ်ရှားမှုအဖြစ် တိန်.ကပြောဆိုခဲ့ပြီး ပါတီတွင်းရှိ ထိုထိုသူများအား မထုတ်ပယ်ခဲ့ခြင်းအတွက် တိန်.ကသူ.အား အပြစ်တင်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်း၌ သူ၏အယူအဆများကို မထောက်ခံကြတော့ပေ ။ တိန်.၏မိန်.ခွန်းကို စာတမ်းအဖြစ် ရေးသားခဲ့ပြီး အရာရှိတချီု.၏ အဝန်းအဝိုင်းအတွင်း ဖြန်.ဝေခဲ့သည် ။ ယောင်ဘန်းအနေဖြင့် ဦးဆောင်မှုပေးရန် ခက်ခဲလာသည့်အလျှောက် နှုတ်ထွက်ရန်မှတစ်ပါး တခြားရွေးချယ်စရာမရှိတော့ပေ ။
နောက်ထပ်တခြားအချက်တစ်ခုမှာ ယောင်ဘန်း၏ အမှုသည် ဟူကျိလီကိုလည်း သက်ရောက်မှုရှိနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည် (သူသည် ဟူယောင်ဘန်း၏ ရင်းနှီးသော လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်) ။ ဟူကျိလီအား ငါးဦးအဖွဲ.အတွင်း ထည့်သွင်းလိုက်ခြင်းအားဖြင့် ယောင်ဘန်း၏ အမှုတွင် ငြိစွန်းခြင်းမှ သူ.အားကာကွယ်နိုင်ပေလိမ့်မည် ။ ဤအစီအစဉ်မှာ ဤကဲ့သို.သော အခြေအနေမျိုး၌ အကောင်းဆုံးဖြစ်သည် ။ ကျိလီအား ယောင်ဘန်း၏နေရာကို ဆက်ခံစေဖို.ဆိုသည်မှာ မဖြစ်နိုင်သောကိစ္စဖြစ်သည် ။ ဤကဲ့သို.သော အချိန်တိုအတွင်း၌ သင့်လျှော်သည့်သူတစ်ယောက်ကို ရှာဖွေဖို.ဆိုသည်မှာ ခက်ခဲလှပေသည် ။ ဤသို.သော အခြေအနေမျိုး၌ ယာယီအထွေထွေအတွင်းရေးမှုးရာထူးအား ငြင်းဆန်ဖို.ဆိုသည်မှာ ကျွန်တော့်အတွက် မလွယ်ကူသလို သင့်လည်းမသင့်လျော်လှပေ ။
ထိုစဉ်အချိန်က ပြည်သူလူထုအတွင်း၌ ကျွန်တော်သည် ယောင်ဘန်းနှင့်ပက်သက်၍ မလိုတမာ မှတ်ချက်များဖြင့် ယောင်ဘန်းအား စွပ်စွဲထားသည့် စာတစ်စောင်ကို တိန်.ရှောင်ပင်းထံသို. ပေးပို.ခဲ့ကြောင်း ကောလာဟလများ ပျံ.နှံ.နေခဲ့သည် ။ တချို.ကဆိုလျှင် သူ.အားအဆုံးသတ်ပစ်ရန် ကျွန်တော်က တိန်.ရှောင်ပင်းအား တိုက်တွန်းခဲ့သည်ဟုပင် ပြောဆိုခဲ့ကြသည် ။ ထိုကိစ္စမှာ လုံးဝမမှန်ပါ ။ ၁၉၈၄ခုနှစ်အတွင်းက ဗဟိုဦးဆောင်မှုစနစ်ကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် မည်သို.ပြုသင့်ကြောင်း တိန်.ရှောင်ပင်းထံသို. စာတစ်စောင် ကျွန်တော်ရေးသားခဲ့ဖူးသည် ။ စာ၏ဆိုလိုရင်းမှာ ဗဟိုကော်မတီအတွင်း အထူးသဖြင့် ပေါ်လစ်ဗျူရိုအတွင်း၌ ဒီမိုကရေစီနည်းကျ ဗဟိုဦးစီးစနစ်ကို လက်တွေ.ကျကျ မည်သို.အကောင်အထည်ဖော်သင့်ကြောင်း တင်ပြခြင်းဖြစ်သည် ။ စာ၏မိတ္တူတစ်စောင်ကို ရဲဘော်ချန်ယန်းထံသို. ပေးပို.ခဲ့သည် ။ ၎င်းစာမှာ ယောင်ဘန်းနှင့် မည်သို.မျှမပက်သက်ပါ ။ စာပါအကြောင်းအရာမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
ဟေလုံကျန်းပြည်နယ် ပါတီအတွင်းရေးမှုး ရဲဘော်ချန်ကျန်ရှန်း၏ ပေးစာမိတ္တူကို ပေးပို.အပ်ပါသည် ။ ၎င်းစာကို ကျေးဇူးပြု၍ဖတ်ကြည့်ပေးပါ ။
သူ၏အကြံပြုချက်သည် အခြေခံကျသည့် ပြဿနာများကို ဖြေရှင်းရန်အတွက် မဟုတ်သော်လည်း သူသည် အလွန်အရေးကြီးသည့် ကိစ္စရပ်များဖြစ်သည့် ကျွန်တော်တို. နိုင်ငံအတွင်း၌ ကောင်းမွန်သည့် အုပ်ချုပ်မှုနှင့် ရေရှည်တည်တံ့နိုင်မည့် ငြိမ်းချမ်းရေးကို မည်သို.မည်ပုံ ထိန်းသိမ်းသင့်သည်ဆိုသည့် ကိစ္စရပ်ကိုမူ ထောက်ပြထားပါသည် ။
လက်ရှိအခြေအနေတွင် အခြေအနေအရပ်ရပ်မှာ တိုးတက်နေပြီး ရှေ.ဆက်၍လည်း ဤလမ်းကြောင်းအတိုင်း ဆက်လက်၍ ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်နေမည်ဟု ယူဆရပါသည် ။ သို.သော်လည်း ဤအချက်သည် ကောင်းမွန်သည့် အုပ်ချုပ်မှုနှင့် ရေရှည်တည်တံ့မည့် ငြိမ်းချမ်းရေး ဆိုသည့်ကိစ္စရပ်များကို အခြေခံကျကျ ဖြေရှင်းပြီးဖြစ်သည်ဟု မပြောနိုင်ပါ ။ နိုင်ငံတော်၏ အခြေခံကျသည့် တရားဥပဒေများ၏ တည်ငြိမ်မှုကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားခြင်းမှာ အချက်တစ်ချက်ဖြစ်ပါသည် ။ သို.သော်လည်း ကျွန်တော်တို.သည် ကွန်မြူနစ်ပါတီ၏ ဦးဆောင်မှုဖြင့် ချီတက်နေသည့် ဆိုရှယ်လစ်နိုင်ငံတစ်ခု ဖြစ်သည့်အားလျော်စွာ ဤကိစ္စကို အခြေခံဥပဒေ ရှုထောင့်တစ်ခုတည်းမှ ကြည့်မြင်သုံးသပ်ခြင်းမှာ လုံလောက်မှုမရှိဟု ကျွန်တော်စိုးရိမ်မိပါသည် ။ ပါတီ၏ ဦးဆောင်မှု အခန်းကဏ္ဍကို အခြေခံကျကျနှင့် အရေးအကြီးဆုံးအဖြစ် ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရမည်ဟု ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါသည် ။ ဤသို.ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့်သာ ပြဿနာများကို အမှန်တကယ် ဖြေရှင်းနိုင်ပါလိမ့်မည် ။
သင်နှင့် ရဲဘော်ချန်ယန်းတို. နှစ်ဦးစလုံး တက်ကြွစွာ လုပ်ကိုင်နိုင်သေးပြီး ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်နေဆဲဖြစ်ပြီး အခြေခံကျသည့် မူဝါဒများကိုလည်း ချမှတ်ပြီးဖြစ်သည့်အားလျော်စွာ သင်၏လမ်းညွှန်မှုနှင့် သင်၏ဆုံးဖြတ်ချက်များကြောင့် ကိစ္စရပ်အများအပြားသည် မှန်ကန်သည့် လမ်းကြောင်းပေါ်တွင် ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါသည် ။ လက်ရှိအချိန်ကာလသည် ကျွန်တော်တို.ပါတီ၏ သမိုင်းကြောင်းတစ်လျှောက်တွင် အကောင်းဆုံးအချိန်ကာလဖြစ်သည်မှာ သံသယရှိစရာမလိုပါ ။ ထိုအကြောင်းကြောင့်ပင်လျှင် ကျွန်တော်တို.၏ ပါတီနှင့် နိုင်ငံတော်အပေါ် မျိုးဆက်များစွာထိ သက်ရောက်နိုင်မည့် အရေးကြီး၍ အဓိကကျသည့် ဤကိစ္စရပ်အပေါ်တွင် သင့်အနေနှင့် ခွန်အားများစွာဖြင့် အာရုံစူးစိုက်နိုင်လိမ့်မည်ဟု ကျွန်တော်ရိုးသားစွာ ယုံကြည်ပါသည် ။ ထို.ကြောင့် ကျွန်တော်တို.၏ ပါတီအတွက် အလွန်ပင်လိုအပ်နေသည့် ဦးဆောင်မှုစနစ်တစ်ခုကို ချမှတ်ပေးပါရန်နှင့် ၊ ထိုစနစ်သည် လူပုဂ္ဂိုလ်များ ပြောင်းလဲသွားသော်လည်း စနစ်ကမူ ပြောင်းလဲသွားခြင်းမရှိပဲ ယဉ်ကျေးမှုနှင့် အစဉ်အလာတစ်ရပ်အဖြစ် ရေရှည်တည်တံ့နိုင်ခြင်း ရှိမရှိကို သင်ကိုယ်တိုင် စစ်ဆေးပေးပါရန် တောင်းပန်အပ်ပါသည် ။ သို.မှသာလျှင် ထိုစနစ်ကို နောင်မျိုးဆက်များအထိ ဆက်လက်၍ လက်ဆင့်ကမ်းပေးသွားနိုင်ပါလိမ့်မည် ။
ကျွန်တော်၏ အကြံပြုချက်ကို ကျေးဇူးပြု၍ စဉ်းစားပေးပါ ။
၎င်းမှာ ၁၉၈၅ခုနှစ် မေလ ၂၆ ရက် ဥရောပသို. ခရီးမထွက်မှီကဖြစ်သည် ။
ဤသည်မှာ ဗဟိုဦးဆောင်မှုနှင့်ပက်သက်၍ ဗဟိုကော်မတီနှင့် တိန်.ရှောင်ပင်းထံသို. ကျွန်တော်ရေးသားခဲ့သည့် တစ်စောင်တည်းသောစာဖြစ်သည် ။ စာကိုကျွန်တော်ကရေးသားခဲ့ပြီး ချန်ကျန်ရှန်း၏ အကြံပြုစာနှင့်အတူ ပေးပို.ခဲ့သည် ။
စာရေးသားရခြင်း၏ အကြောင်းမှာ လေးဦးဂိုဏ်းကို၉ ဖြိုခွင်းအပြီး ယဉ်ကျေးမှုတော်လှန်ရေး၏ ရက်စက်မှုများကို ဗဟိုဦးဆောင်အဖွဲ.မှ ပြန်လည်သုံးသပ်နေချိန်၌ ဤသို.သော ရက်စက်မှုမျိုး နောက်နောင်တွင် ထပ်မံမပေါ်ပေါက်အောင် မည်သို.ကာကွယ်တားဆီးမည်နည်းဟု ကျွန်တော်တို. မကြာခဏဆွေးနွေးခဲ့ကြသည် ။ ဤသို.ဆွေးနွေးရာမှ အာဏာကို လူတစ်ဦးတစ်ယောက်၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်အတွင်း၌ စုပြုံမထားမိစေရန်နှင့် အာဏာအလွဲသုံးစားလုပ်ခြင်းမှ ကာကွယ်နိုင်ရန်အတွက် ကျွန်တော်တို.ပါတီ၏ ခေါင်းဆောင်မှုပုံစံကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲဖြေရှင်းရန်လိုအပ်ကြောင်း ကျွန်တော်တို. တွေ.ရှိလာခဲ့သည် ။
သို.သော်လည်း ၁၂ကြိမ်မြောက် ပါတီကွန်ဂရက်အပြီး၌ ပြည်တွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာအခြေအနေများမှာ ကောင်းမွန်၍ တိုးတက်နေသည့်အတွက်ကြောင့် ဤကိစ္စနှင့်ပက်သက်သည့် ဆွေးနွေးမှုများမှာ မှေးမှိန်သွားခဲ့သည် ။ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကို ကျွန်တော်တို. ဆက်လက်အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့ကြသည့်အတွက် ကျွန်တော်တို.၏ စီးပွါးရေးမှာ လျှင်မြန်စွာတိုးတက်ကြီးထွားလာ၍ ပြည်သူလူထု၏ လူနေမှုအဆင့်အတန်း မြင့်မားလာပြီး ဗဟိုဦးဆောင်မှုအတွင်း၌ ဒီမိုကရက်တစ် ယဉ်ကျေးမှု အားကောင်းလာခဲ့သော်လည်း ပေါ်လစ်ဗျူရိုအတွင်း၌သော်လည်းကောင်း ၊ တည်ဆဲပေါ်လစ်ဗျူရိုကော်မတီအတွင်း၌သော်လည်းကောင်း ဥပဒေပြု အစည်းအဝေးအတွင်း၌သော်လည်းကောင်း တည်ရှိနေသည့် ခေါင်းဆောင်မှုစနစ်နှင့်ပက်သက်သည့် ပြဿနာကိုမူ ဖြေရှင်းနိုင်ခြင်းမရှိသေးပေ ။ ၎င်းတို.သည် ယခင်အတိုင်းပင် အနည်းနှင့်အများ တည်ရှိနေဆဲဖြစ်သည် ။
ထို.ကြောင့်ပင်လျှင် ဤကိစ္စကို ပြန်လည်၍ အစဖော်ပေးဖို.လိုမည်ဟု ကျွန်တော်ခံစားမိသည် ။ ယခုကဲ့သို. အခြေအနေကောင်းများပေါ်ပေါက်နေသည့်အချိန်၌ ဤကိစ္စကို မဖြေရှင်းခဲ့ပါလျှင် အနာဂတ်ကာလ ခေါင်းဆောင်များနှင့်ပက်သက်၍ ပြဿနာများ မပေါ်ပေါက်နိုင်ဟု အာမခံရန် ခက်ခဲပါလိမ့်မည် ။
ကျွန်တော်၏စာကို ဤရှုထောင့်မှရေးသားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး မည်သည့်ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးတစ်ယောက်ကိုမှ ရည်ညွှန်းပြောဆိုခြင်းမရှိပါ ။ ခေါင်းဆောင်မှုနှင့်ပက်သက်၍ ပြဿနာကြီးကြီးမားမားရှိသည်ဟု ကျွန်တော်မခံစားမိပါ ။ အခြေအနေများမှာ ကောင်းမွန်နေပါသည် ။ သို.သော်လည်း လက်ရှိကောင်းနေသည့် အခြေအနေများကြောင့် အနာဂတ်ကာလ အခြေအနေများလည်း ကောင်းမွန်လိမ့်မည်ဟုတော့ အာမမခံနိုင်ပါ ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် စနစ်နှင့်ပက်သက်သည့် ကိစ္စရပ်များကို မဖြေရှင်းရသေးသောကြောင့်ဖြစ်သည် ။ ခေါင်းဆောင်မှုအပိုင်းနှင့်ပက်သက်၍ မည်သည့်ပြဿနာကိုမှ ရည်ညွှန်းခဲ့ခြင်းမရှိသလို ယောင်ဘန်းနှင့်ပက်သက်၍သော်လည်းကောင်း တခြားခေါင်းဆောင် တစ်ဦးတစ်ယောက်ကိုမျှသော်လည်းကောင်း ကျွန်တော် ရည်ညွှန်းပြောကြားခဲ့ခြင်းမရှိပါ ။
ကျွန်တော်၏စာတွင်ယောင်ဘန်းနှင့်ပက်သက်၍ ပြဿနာရှိနေသည် ထို.ကြောင့် ခေါင်းဆောင်မှုစနစ်ကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲရန် လိုအပ်သည်ဟု ဆိုလိုခြင်းမရှိပါ ။ ထို.အတူ ယောင်ဘန်းသည် အသိဥာဏ်နှင့်ပြည့်စုံကြွယ်ဝသည် ထို.ကြောင့် ဗဟိုခေါင်းဆောင်မှုစနစ်ကို တိုးတက်ကောင်းမွန်လာအောင် ပြုပြင်မှုပြုလုပ်ရန် မလိုအပ်ပါဟု ဆိုလိုခြင်းလည်း မရှိပါ ။
ယောင်ဘန်းသည် နှစ်လိုဖွယ်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးရှိပြီး ပွင့်လင်းသည့်စိတ်သဘောရှိကာ မတူကွဲပြားသည့် အယူအဆများကို နားထောင်နိုင်စွမ်းရှိသူဖြစ်သည် ။ သူသည် ပြည်သူလူထုအပေါ်များစွာ စေတနာကောင်းထားသူဖြစ်၍ ပြည်သူလူထုအား ခက်ခဲသည့် အချိန်ကာလများ မကြုံကြိုက်စေလိုသူဖြစ်သည် ။ ပြည်သူလူထုသည် သူနှင့်ငြင်းခုန်နိုင်သည် ၊ ရန်ပင်ဖြစ်နိုင်သေးသူဖြစ်သည် ။ သူသည် သဘာဝအားဖြင့် ပွင့်လင်းသည့် စိတ်ထားရှိသူဖြစ်ခြင်းကြောင့် ခေါင်းဆောင်မှုစနစ်နှင့်ပက်သက်၍ ကျွန်တော်တို. စဉ်းစားသုံးသပ်ရန် မလိုအပ်သေးဟူသည့် အဓိပ္ပါယ်မသက်ရောက်ကြောင်း ကြိမ်ဖန်များစွာပင် ကျွန်တော်ပြောခဲ့ဖူးသည် ။ သူသည် အသက်၇၀ ပြည့်ပြီးဖြစ်သောကြောင့် ပါတီဝါရင့်ကြီးများ ကွယ်လွန်သွားပြီးသည့်နောက်ပိုင်း၌ အချိန်မည်မျှကြာအောင် သူက ဦးဆောင်မှုပေးနိုင်မည်ဟု မည်သူကပြောနိုင်ပါမည်နည်း ။
ပါတီတွင်း ဝေဖန်ဆန်းစစ်ရေးအစည်းအဝေး၌ ကျွန်တော်ပြောကြားခဲ့သည့် မိန်.ခွန်းတွင် ကျွန်တော်တို.သည် စနစ်အပေါ်တွင် အခြေတည်သင့်၍ လူတစ်ဦးတစ်ယောက်အပေါ်တွင် အခြေမတည်သင့်ကြောင်း အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် လူဆိုသည်မှာ ပြောင်းလဲတတ်သောကြောင့်ဖြစ်ကြောင်း ကျွန်တော်ပြောကြားခဲ့သည် ။ ကောင်းမွန်သည့်စနစ်မရှိပါက စတာလင်နှင့် ဥက္ကဋ္ဌကြီးမော်တို.ကဲ့သို.သော ကြီးကျယ်ထင်ရှားသည့် ခေါင်းဆောင်ကြီးများတွင်ပင်လျှင် ပြဿနာများရှိနေတတ်သည် ။ ရှောင်ပင်းထံသို. ကျွန်တော်ပို.ခဲ့သည့်စာတွင် စာပါအကြောင်းအရာကို ရှင်းလင်းပြထားခြင်း မရှိပေ ။ ထို.အပြင် ယောင်ဘန်းအပေါ်ဝေဖန်ရာ၌ ကျွန်တော်က ဒီမိုကရေစီနည်းကျ ဗဟိုဦးစီးစနစ်၏ ဥပဒေများနှင့် ပါတီစည်းမျဉ်းများကို လိုက်နာခြင်း မလိုက်နာခြင်းတို.အပေါ်တွင် အခြေခံ၍ ဝေဖန်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည် ။ ထို.ကြောင့် ယောင်ဘန်းနှင့်ပက်သက်သည့် ကျွန်တော်၏ ဝေဖန်ချက်များကို စာတွင်ပါရှိသည့် အကြောင်းအရာများအဖြစ် အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုနေကြခြင်းလည်း ဖြစ်နိုင်ပေသည် ။ ဤအချက်ကြောင့် ကောလာဟလများ ပျံ.နှံ.ခြင်း ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည် ။
သိပ်၍ကျယ်ပြန်.ခြင်းမရှိသည့် နောက်ထပ်တခြားကောလာဟလတစ်ခုလည်း ရှိသေးသည် ။ ၎င်းကို အတော်နောက်ကျမှ ကျွန်တော်သိရသည် ။ ပါတီဝါရင့်ကြီးများသည် ၁၃ကြိမ်မြောက် ပါတီကွန်ဂရက်မတိုင်မှီ အနားယူကောင်းအနားယူနိုင်သည် ဆိုသည့်ကိစ္စကို ယောင်ဘန်းက မကြာခဏပြောလေ့ရှိသည် ။ ထို.ကြောင့် တိန်.ရှောင်ပင်းသည် တစ်ခါက ယောင်ဘန်းနှင့် ကျွန်တော်၏ရှေ.၌ သူသည် ၁၃ကြိမ်မြောက်ပါတီကွန်ဂရက်၌ အနားယူမည်ဟုပြောကြောင်း ကောလာဟလတစ်ခု ထွက်ပေါ်ခဲ့သည် ။ ဟူယောင်ဘန်းက ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိဖြင့် “လက်နှစ်ဖက်လုံးထောင်ပြပြီးတောင် ထောက်ခံအတည်ပြုပေးမယ်”ဟုပြောကြားပြီး ကျွန်တော်ကမူ “ခင်ဗျားအငြိမ်းစားမယူရဘူး ။ လုံးဝအနားမယူရဘူး”ဟုပြောကြောင်း ထွက်ပေါ်ခဲ့သည် ။ ဤဖြစ်ရပ်ကြောင့် ယောင်ဘန်းသည် လုံးဝစိတ်ချရသူမဟုတ်ကြောင်း တိန်.အနေဖြင့် ခံစားရသည် ။ ဤကောလာဟလမှာ လုံးဝလုပ်ကြံဖန်တီးထားသည့် ဇာတ်လမ်းတစ်ခုသာဖြစ်သည် ။
ယောင်ဘန်းရာထူးမှ နှုတ်ထွက်အနားမယူခင်က တိန်.သည် ယောင်ဘန်းနှင့်ကျွန်တော်၏ရှေ.တွင်မဆိုထားနှင့် ကျွန်တော်တစ်ယောက်တည်း၏ ရှေ.တွင်တောင်မှ သူအနားယူမည့်အကြောင်း မပြောခဲ့ပေ ။ တည်ဆဲပေါ်လစ်ဗျူရိုကော်မတီနှင့် ဗဟိုအကြံပေးကော်မရှင်၏ ဥက္ကဋ္ဌရာထူးမှ သူနှုတ်ထွက်တော့မည့်အကြောင်းကို ကျွန်တော်ပထမဆုံးအကြိမ် စတင်ကြားသိရသည်မှာ ၁၉၈၆ခုနှစ်နွေရာသီအလွန်၌ ယောင်ဘန်းက သူနှင့်တိန်.တို.၏ ဆွေးနွေးပွဲအကြောင်းကို ပြောကြားလာမှ ကျွန်တော်ကြားဖူးခြင်းဖြစ်သည် ။ ကျွန်တော်တို.၏ သဘောထားကို တိန်.ကတောင်းခံသည့် ဖြစ်ရပ်မျိုးမရှိခဲ့ဖူးပေ ။
ကျွန်တော်ကမူ တိန်.အား သူ၏တရားဝင်ရာထူးကို ဆက်လက်ရယူထားရန်နှင့် တည်ဆဲပေါ်လစ်ဗျူရိုကော်မတီမှ မနှုတ်ထွက်ရန် အမှန်ပင်ပြောခဲ့ဖူးသည် ။ ထိုကိစ္စသည် ၁၉၈၇ခုနှစ် ယောင်ဘန်းရာထူးမှနှုတ်ထွက်သွားအပြီး ကျွန်တော် ယာယီအထွေထွေအတွင်းရေးမှုးအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်စဉ်ကကဖြစ်သည် ။ တိန်.သည် ဆက်လက်၍ ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲနေဆဲဖြစ်သဖြင့် သူ.အနေဖြင့် တည်ဆဲပါတီကော်မတီအတွင်းမှနေ၍ ဤသို.ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေခြင်းရန် ကျွန်တော်ကနှစ်သက်လိုလားသည် ။
နောက်ထပ်ပြောသင့်သည့် အဖြစ်အပျက်တစ်ခုရှိသေးသည် ။ ၁၉၈၃ခုနှစ် မတ်လ သို.မဟုတ် ဧပြီလအတွင်းက ပြုလုပ်ခဲ့သည့် တည်ဆဲပေါ်လစ်ဗျူရိုကော်မတီ အစည်းအဝေးတစ်ခု၌ ရဲဘော်ချန်ယန်း၏ ယောင်ဘန်းအားဝေဖန်မှုကြောင့် အနှောင့်အယှက်အနည်းငယ် ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည် ။ ဤအဖြစ်အပျက်သည် ၁၉၈၇ခုနှစ်အတွင်း ယောင်ဘန်းနှုတ်ထွက်ခြင်းနှင့် မည်သို.မျှမပက်သက်သော်လည်း ဤအဖြစ်အပျက်နှင့်ပက်သက်သည့် ကောလာဟလများ ပျံ.နှံ.ခဲ့ပြီး တချို.ကောလာဟလများတွင် ကျွန်တော်လည်း ပါဝင်နေခဲ့သည် ။
ထိုအစည်းအဝေး၏ အဓိကဆွေးနွေးမည့်အကြောင်းအရာမှာ တိန်.နှင့်တည်ဆဲပေါ်လစ်ဗျူရိုကော်မတီသို. စီးပွါးရေးနှင့်ပက်သက်သည့် လုပ်ဆောင်ချက်များကို အစီရင်ခံရန်ဖြစ်သည် ။ ထိုစဉ်အချိန်က တိန်.သည် စီးပွါးရေးနှင့်ပက်သက်သည့် နှစ်စဉ်ရည်မှန်းချက်သတ်မှတ်မှုများမှာ ၂နှစ်ဆက်တိုက်မျှ အလွန်အမင်းနိမ့်ကျစွာ သတ်မှတ်ထားသည်ဟု ယူဆနေသည် ။ ရလာဒ်အားဖြင့် ရည်မှန်းချက်သတ်မှတ်မှုများကို လွန်မင်းစွာတိုးမြှင့်သတ်မှတ်ကြခြင်းဖြစ်ပြီး ဤအချက်ကိုတိန်.က သဘောမကျပေ ။ သို.သော် ကျွန်တော်နှင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးကော်မရှင်မှ ရဲဘော်များက ရည်မှန်းချက်သတ်မှတ်မှုများကို ဤသို.အလွန်အကျွံ တိုးမြှင့်သတ်မှတ်ခြင်းဖြင့် မည်သည့်အကျိုးအမြတ်မျှမရှိဟု ယူဆကြသည် ။ လုပ်သာကိုင်သာရှိစေရန် သတ်မှတ်ခြင်းက ပို၍ကောင်းသည် ။ အစီရင်ခံစာ၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ကျွန်တော်တို.၏ အကြောင်းပြချက်များကို ရှင်းလင်းစွာ တင်ပြရန်ဖြစ်သည် ။
ယောင်ယိလင်နှင့်ဆုန်ပင်းတို.က စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးကော်မရှင်ကိုယ်စား အစီရင်ခံတင်ပြကြသည် ။ သူတို.၏ အစီရင်ခံစာကို တင်ပြပြီးနောက်၌ ကျွန်တော် စကားပြောသည် ။ သူတို.၏ သုံးသပ်ချက်ကို သဘောတူထောက်ခံရုံမျှသာမက ဘဏ္ဍာအခွန်ငွေရရှိမှုနှင့် အမျိုးသား အသားတင်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု အချိုးအစား များစွာလျှော့နည်းလာနေမှုကိုလည်း ကျွန်တော်က ထောက်ပြခဲ့သည် ။ ဤအချက်မှာ ပုံမှန်ပင်ဖြစ်သည် အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ကျွန်တော်တို.သည် အကြွေးများကို ပြန်ဆပ်နေသောကြောင့်ဖြစ်သည် ။ သို.သော် ၎င်းမှာ ကာလကြာရှည်စွာ အချိန်ဆွဲလုပ်နေ၍တော့မဖြစ်ပေ သို.မဟုတ်ပါက ဗဟိုအဆင့်ဘဏ္ဍာငွေခွဲဝေမှုတွင် ပြဿနာများ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည် ။
ကျွန်တော်ပြောကြားအပြီး၌ ပြောကြားခဲ့သည့် အကြောင်းအရာကို ဆွေးနွေးခွင့် တစ်စုံတစ်ရာ မရသေးမှီမှာပင် ရဲဘော်ချန်ယန်းသည် အသင့်ရေးသားလာခဲ့သည့် မိန်.ခွန်းတစ်ခုကို ဆွဲထုတ်လိုက်ပြီး စီးပွါးရေးနှင့်ပက်သက်ပြီး မကြာသေးမှီက ယောင်ဘန်းပြောကြားခဲ့သည့် စကားများကို အထူးဦးတည်၍ တိုက်ခိုက်ဝေဖန်တော့သည် ။ ဝေဖန်ချက်မှာ ပြင်းထန်လွန်းလှသည် ။ ဥပမာအားဖြင့် ယောင်ဘန်းက ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဋ္ဌာနသည် ဘတ်ဂျတ်လိုငွေပြမှုကို တနှစ်ပြီးတနှစ် ပုံကြီးချဲ.ကားထုတ်ပြန်ခြင်းဖြင့် ပြည်သူလူထုကို ထိတ်လန်.တုန်လှုပ်အောင် လုပ်ဆောင်နေကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည် ။ ချန်ယန်းက အစီရင်ခံတင်ပြသည့် ဘတ်ဂျတ်လိုငွေပြမှု လက်တွေ.အားဖြင့် မှန်ကန်သည့် ပမာဏဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားသည် ။ ပထမ ငါးနှစ်စီမံကိန်းသည် စီးပွါးရေးလုပ်ငန်းစုကြီးများကို ဖန်တီးနိုင်ခဲ့သော်လည်း အသေးစားနှင့် အလတ်စား လုပ်ငန်းများကို လျစ်လျှူရှုခဲ့ကြောင်း ယောင်ဘန်း၏ ပြောကြားချက်ကိုလည်း ဝေဖန်ရှုတ်ချခဲ့သည် ။
ယောင်ဘန်းမှာ ဤအချက်ကို မျှော်လင့်ထားခြင်းမရှိသဖြင့် ချန်ယန်း၏ မိန်.ခွန်းအပြီး၌ မည်သို.မျှ ပြန်လည်မချေပနိုင်ပဲ သူ.အနေဖြင့် အမှားများကို ပြုလုပ်မိခဲ့ကြောင်းနှင့် ၎င်းတို.ကို သေချာစွာ ပြန်လည်သုံးသပ် ဆင်ခြင်သွားပါမည်ဟုသာ ပြောကြားနိုင်ခဲ့သည် ။ ချန်ယန်းသည် ကာလကြာရှည်စွာ မြိုသိပ်ထားခဲ့သည့် ယောင်ဘန်းအပေါ်မကျေနပ်မှုများကို ဖောက်ထုတ်လိုက်ဟန်ရှိသည် ။
ရဲဘော်ရှောင်ပင်းသည် ဤသို.သော အနေအထားမျိုး၌ ယောင်ဘန်းကို မဝေဖန်လို ၊ ဤကိစ္စကို မငြင်းခုန်ုလိုပေ ။ သူ.ကိုကြည့်ရသည်မှာ စိတ်မချမ်းမသာဖြစ်နေပုံပေါ်သည် ။ သူက ဤသို.သောကိစ္စများကို နောက်နောင်သင့်တော်သည့် အချိန်ကာလတွင် ဆွေးနွေးနိုင်ကြောင်းနှင့် ကျွန်တော်တို.၏ အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာ အစီရင်ခံစာကို ကြားနာရန်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည် ။ ထို.ကြောင့် ဆွေးနွေးမှုကို ဆက်လက်မလုပ်ဆောင်ခဲ့ပေ ။
ရဲဘော်ချန်ယန်း မိန်.ခွန်းပြောအပြီး၌ တခြားသူများမှာ သူတို.၏ အယူအဆကို တင်ပြဖို. ခက်ခဲသွားပေသည် ။ သို.သော် ဟူကျားမူက မတ်တပ်ထရပ်ပြီး ပြောကြားခဲ့သည် ။ သူက ယောင်ဘန်းပြောကြားခဲ့သည့် စကားများနှင့် ရဲဘော်ချန်ယန်း၏ ဝေဖန်ချက်များမှာ လူအများကြားတွင် ကျယ်ကျယ်ပြန်.ပြန်. ပျံ.နှံ.နေကြောင်းနှင့် စီးပွါးရေးမူဝါဒများကို များစွာအနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေကြောင်း ပြောခဲ့သည် ။ သူက ခရိုင်နှင့် မြူနီစီပယ်အဆင့် အရာရှိများကို အစည်းအဝေးတစ်ခု ခေါ်ယူ၍ ချန်ယန်း၏ ဝေဖန်ချက်များကို အသိပေးဖို. အကြံပြုခဲ့သည် ။ ထိုအချိန်၌မူ တိန်.ရှောင်ပင်းမှာ တခြားရွေးချယ်စရာမရှိတော့ပဲ “ကောင်းပြီလေ ။ ဒီအကြောင်းကို နောက်မှဆွေးနွေးကြတာပေါ့”ဟု ပြောကြားခဲ့သည် ။
တစ်ရက်နှစ်ရက်မျှ ကြာပြီးသည့်အချိန်၌ ကျွန်တော်၏အိမ်သို. ဟူကျိလီ ရုတ်တရက်ရောက်လာပြီး ဘာတွေဖြစ်နေသည်ကို ပြောကြားခဲ့သည် ။ တိန်.လီကျန်သည် မည်သူ.ကိုမျှ တိုင်ပင်ပြောကြားခြင်းမရှိပဲ တည်ဆဲပေါ်လစ်ဗျူရိုကော်မတီ၌ ယောင်ဘန်းအပေါ် ချန်ယန်း၏ ဝေဖန်ချက်များကို ဆင်ဟွာသတင်းဋ္ဌာနမှပြုလုပ်သည့် အမျိုးသားကွန်ဖရင့်တွင် ဖြန်.ဝေခဲ့သည် ။ ဤလုပ်ရပ်သည် အမှန်တကယ်ပင် အန္တရာယ်ကြီးသည်ဟု ဟူကျိလီနှင့်ကျွန်တော်တို.က ယူဆကြသည် ။ ဤလုပ်ရပ်သည် နိုင်ငံနှင့်အဝှမ်း ရှုပ်ထွေးမှုများ ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည် ။ ယောင်ဘန်းအနေဖြင့် တစ်စုံတစ်ရာဝင်ရောက်ပြောဆိုရန် ခက်ခဲသောကြောင့် ကျွန်တော် ကြားဝင်ရပေမည် ။
တိန်.လီကျန်ကို ကျွန်တော်ဖုန်းခေါ်လိုက်ပြီး သူလုပ်ခဲ့သည့် အမှားအယွင်းအတွက် ဝေဖန်ပြီး စင်ဟွာသတင်းဋ္ဌာနအနေဖြင့် သူ၏မိန်.ခွန်းကို ပြန်လည်ပယ်ဖျက်၍ ၎င်းကို ဖြန်.ချီခြင်းမပြုရန် ကျွန်တော်ပြောကြားခဲ့သည် ။ ဤသို.ဖြစ်ပျက်ခဲ့ပေသည် ။
ထိုသို.ဖြစ်ပျက်ခဲ့ပြီးနောက် တီယန်ကျင်းသို. ကျွန်တော်ခရီးထွက်ခဲ့သည် ။ ကျွန်တော်ပြန်အရောက်၌ ကျွန်တော့်အိမ်သို. ယောင်ဘန်းရောက်ရှိလာခဲ့ပြီး ခရိုင်အဆင့်နှင့် မြူနီစီပယ်အဆင့် အရာရှိများ၏ အစည်းအဝေးကို တိန်.ရှောင်ပင်းက ပြန်လည်သုံးသပ်ခဲ့ပြီး အစည်းအဝေးကို မပြုလုပ်တော့ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်ဟု ကျွန်တော့်အားပြောသည်။ အကယ်၍ အစည်းအဝေးသာခေါ်ယူဖြစ်ခဲ့ပါက အကျိုးသက်ရောက်မှုများမှာ ပို၍များပြားလိမ့်မည်ဟု ရှောင်ပင်းက ယူဆပုံရသည်ဟု ကျွန်တော်ခြုံငုံ၍ ကောက်ချက်ချမိသည် ။
တချိန်တည်းမှာပင် ယောင်ဘန်းက ဗဟိုခေါင်းဆောင်များအတွင်း၌ အပြောင်းအလဲများ ရှိနေသည်ဟု ကောလာဟလများ ပျံ.နှံ.နေကြောင်း ယောင်ဘန်းကပြောလာသည် ။ ယောင်ဘန်းသည် လက်သည်ထက်ပို၍ အကဲဆတ်နေသည်ဟု ကျွန်တော်ယူဆသည် ။ တို.ကြောင့် “အဲဒီကောလာဟလတွေကို ခင်ဗျားနားထောင်မနေသင့်ဘူး။ ကျွန်တော်သိသလောက်တော့ ရဲဘော်ချန်ယန်းက ဒီနှစ်ကာလတွေအတွင်း ခင်ဗျားပြောခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေနဲ.ပက်သက်ပြီး သူစုပြုံခံစားလာခဲ့ရတဲ့ ဒေါသတွေကို ဖောက်ထုတ်ရုံလောက်ပဲလုပ်ခဲ့တာပါ ။ အခုလိုပေါက်ကွဲပြီးတဲ့နောက်မှာ အားလုံးပြီးသွားမှာပါဗျ ။ ခင်ဗျားကလည်းပဲ ဒီကိစ္စနဲ.ပက်သက်ပြီး တအားအကဲဆတ်မနေပါနဲ.လေ ။ အခုဆိုရင် ကျွန်တော်တို.ဟာ တစ်လှေတည်းစီး တစ်ခရီးတည်းသွားတွေပါ ။ ကျွန်တော်တို. အတူတူ မြစ်ကိုဖြတ်ကူးကြတာပေါ့ဗျာ ။ ဟူကျားမူနဲ. တိန်.လီကျန်တို.မှာလည်း တခြားရည်ရွယ်ချက်တွေ ရှိမယ်လို. ကျွန်တော်မထင်ပါဘူး”ဟု သူ.ကို ကျွန်တော်ပြောကြားခဲ့သည် ။
၎င်းမှာ ထိုစဉ်က ကျွန်တော်တွေးမိခဲ့သည့် အတွေးဖြစ်သည် ။ “သူတို.လည်း ပညာတတ်တွေပါ ။ ချန်ယန်းနဲ.ပက်သက်ပြီးပြောရရင်တော့ သူကပိုပြီးတောင် ရည်ရွယ်ချက်မရှိနိုင်သေးတယ် ။ ကျွန်တော်တို.အားလုံး စည်းစည်းလုံးလုံးရှိရမယ် ။ သိပ်ပြီးစိတ်ပူမနေပါနဲ.”ဟု ကျွန်တော်ကပြောခဲ့သည် ။
ယောင်ဘန်းက ကျွန်တော်ပြောသမျှကို လက်ခံသဘောတူသည် ။ ထို.နောက်ပိုင်း ဟူကျိလီနှင့် ကျွန်တော် တွေ.ဆုံမိရာ၌ သူက ယောင်ဘန်းသည် ကျွန်တော်နှင့် စကားပြောပြီးသည့် နောက်ပိုင်းတွင် ရွှင်ရွှင်လန်းလန်း ရှိလာကြောင်း ကျွန်တော့်ကိုပြောပြသည် ။ “ကျိယန်ပြောတာတွေ အရမ်းကောင်းတယ် ။ အခုငါတို.လုပ်ရမှာက တစ်လှေတည်းစီးပြီး မြစ်ကိုအတူတူဖြတ်ကူးဖို.ပဲ”ဟု ယောင်ဘန်းကသူ.ကိုပြောသည်ဟုဆိုသည် ။
အထက်ပါတို.မှာ ဖြစ်ပျက်ခဲ့သမျှပင်ဖြစ်သည် ။ ပြည်သူလူထုအတွင်း၌မူ တည်ဆဲပေါ်လစ်ဗျူရိုကော်မတီ အစည်းအဝေးတွင် ယောင်ဘန်းအား ဝေဖန်ရှုတ်ချကြသည်ဟု ကောလာဟလများ ပျံ.နှံ.ကောင်း ပျံနှံ.နေပေမည် ။ အမှန်တကယ်တွင်မူ ဤသို.မဟုတ်ပေ ။ ချန်ယန်းသည် မိန်.ခွန်းပြောမည့် တစ်ဦးတည်းသော ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သည် ။ သူ၏မိန်.ခွန်းမှာ ယောင်ဘန်းကို ဦးတည်မိပြီးဖြစ်သောကြောင့် မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်ကမျှ ဘာမှမပြောနိုင်ခဲ့ပေ ။ နဂိုမူလက ကျွန်တော့်တွင်လည်း စီးပွါးရေးနှင့်ပက်သက်သည့် ယောင်ဘန်း၏ အားထုတ်မှုများနှင့် သတိလက်လွတ်ပြုလုပ်တတ်သည့် သူ၏အမှတ်တမဲ့ အမှားများကို ဝေဖန်ဆန်းစစ်ရန် အစီအစဉ်ရှိခဲ့သည် ။ သို.သော်လည်း ဤသို.သောအခြေအနေမျိုး၌ ဤသို.ပြုလုပ်ရန် မသင့်လျော်ဟု ကျွန်တော်ယူဆသည် ။ ထို.ကြောင့် ကျွန်တော်က မည်သို.မျှ မပြောကြားခဲ့တော့ပေ ။
ရက်အနည်းငယ်ကြာအပြီး၌ တိန်.ရှောင်ပင်းက စကားစမြည်ပြောဆိုဆွေးနွေးရန်အတွက် ယော်ယိလင်နှင့် ကျွန်တော့်အား ခေါ်ယူခဲ့သည် ။ နဂိုမူလက ယောင်ဘန်းနှင့်ပက်သက်၍ အစည်းအဝေးတစ်ခု ပြုလုပ်ရန် အစီအစဉ် ရှိခဲ့သည်ဟု တိန်.ကပြောသည် ။ သို.သော်လည်း ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ဖွယ်ရှိသည့် အကျိုးဆက်များကို တွက်ဆပြီးနောက်ပိုင်း၌ အစည်းအဝေးကို ပယ်ဖျက်ခဲ့သည် ။ သူက ယောင်ဘန်းတွင် အားနည်းချက်များစွာရှိကြောင်း သို.သော်လည်း ဆက်လက်၍ ထောက်ခံပံ့ပိုးပေးဖို. လိုအပ်ဆဲဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည် ။
ကျွန်တော်က ချက်ချင်းပင် ထောက်ခံကြောင်း ပြောကြားလိုက်သည် ။ ထို.နောက် ရှောင်ပင်းက ယော်ယိလင်ကို ဝေဖန်ခဲ့သည် အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဤအဖြစ်အပျက်မတိုင်မှီက ယော်ယိလင်နှင့် စုန်ပင်းတို.သည် တည်ဆဲပေါ်လစ်ဗျူရိုကော်မတီနှင့် တိန်.ရှောင်ပင်းထံသို. စာတစ်စောင်ရေးသား၍ ယောင်ဘန်း၏ သတိလက်လွတ် အမှတ်တမဲ့ပြောကြားချက်များသည် ၁၂ကြိမ်မြောက် ပါတီကွန်ဂရက်မှ ချမှတ်ထားသည့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် မညီညွတ်ကြောင်း စွပ်စွဲခဲ့ကြသည် ။ အကျိုးဆက်အားဖြင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးကော်မရှင်အနေဖြင့် ၎င်း၏လုပ်ငန်းများကို အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် အခက်အခဲများ တွေ.ကြုံရသည်ဟု ဖော်ပြထားသည် ။
တိန်.က ယော်ယိလင်အား “မင်းက စာထဲမှာ မင်းရဲ.ဒေါသတွေကို ပေါက်ကွဲထားတာပဲ”ဟု စွပ်စွဲသည် ။
ယော်ယိလင်က ချက်ချင်းပင် “ဟုတ်ကဲ့ ။ ကျွန်တော် ပေါက်ကွဲခဲ့ပါတယ်”ဟု ပြန်လည်ပြောကြားခဲ့သည် ။
၁ ။ ။ လစ်ဘရယ်ဝါဒ ဆန်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှု (ဘူဇွာလစ်ဘရယ် ဆန်.ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှု ဟုလည်း လူသိများသည်)ကို တရုတ်ပညာတတ်များအတွင်း ကျယ်ပြန်.ကြီးထွားလာနေသည့် လစ်ဘရယ်ရေစီးကြောင်းကို တိုက်ဖျက်ရန်အတွက် ပါတီရှေးရိုးစွဲဝါဒီများက ၁၉၈၇ ခုနှစ်အတွင်း ပြုလုပ်ဆင်နွှဲခဲ့ကြသည် ။
၂ ။ ။ ၁၉၇၉ခုနှစ်အတွင်း တိန်.အဆိုပြုခဲ့သည့် အခြေခံမူလေးချက်၌ ဆိုရှယ်လစ်လမ်းကြောင်း ၊ ပြည်သူ.ဒီမိုကရက်တစ် အာဏာရှင်စနစ် ၊ ကွန်မြူနစ်ပါတီ၏ ဦးဆောင်မှုနှင့် မာ့က်စ်-လီနင်-မော်စီတုန်း အတွေးအခေါ် စသည့် နိုင်ငံတော်၏ ဒေါက်တိုင်ကြီးလေးခုနှင့် ပက်သက်၍ မေးခွန်းထုတ်ရန်မလိုကြောင်း အလေးပေးပြောကြားထားသည် ။
၃ ။ ။ “သဘောတရားရေးရာမျက်နှာစာ” ဆိုသည်မှာ မူဝါဒများကို ထောက်ခံပံ့ပိုးရန်အတွက် သဘောတရားရေးအရ ဆွေးနွေးငြင်းခုန်ကြသည့် ပါတီအဖွဲ.အစည်း အမျိုးမျိုးကို ဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည် ။ ၎င်းသည် ရှေးရိုးစွဲဝါဒီများနှင့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးသမားများ၏ တိုက်ပွဲနယ်မြေဖြစ်သည် ။
၄ ။ ။ စိတ်ဓာတ်ရေးရာ ညစ်နွမ်းမှုဆန်.ကျင်ရေး လှုပ်ရှားမှုကို အနောက်တိုင်းအတွေးအခေါ် လွှမ်းမိုးမှုကို သုတ်သင်ဖယ်ရှားရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ၁၉၈၃ ခုနှစ်တွင် စတင်ဆင်နွှဲခဲ့သည် ။ မူလအခေါ်အဝေါ် စိတ်ဓာတ်ရေးရာ ညစ်နွမ်းမှု ရှင်းလင်းရေးဟူသည့်အမည်ကို တိန်.ရှောင်ပင်းက စတင်သုံးစွဲခဲ့ပြီး ပို၍ပြင်းထန်သည့် ပြစ်ဒဏ်ခတ်မှုမျိုး ချမှတ်ရန်ရည်ရွယ်ရင်းရှိသည် ။
၅ ။ ။ “ပါတီတွင်း ဝေဖန်ဆန်းစစ်ရေး အစည်းအဝေး”သည် ပါတီဝင်တို.အတွင်း၌ “အတွေးအခေါ်နှင့် အတွေ.အကြုံတို. အပြန်အလှန် ဖလှယ်နိုင်ရေးနှင့် ဝေဖန်ရေးနှင့် မိမိကိုယ်ကို ဝေဖန်ရေး”တို. ပြုလုပ်ရန်ရည်ရွယ်၍ ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်သည် ။ ပါတီပဋိဥာဉ်အရ ဤကဲ့သို.သော အစည်းအဝေးမျိုးကို ၁နှစ်လျှင် ၂ကြိမ်မှ၎ကြိမ်ထိ ပါတီခွဲအသီးသီး၌ ပြုလုပ်ရမည်ဟု ဖော်ပြထားသည် ။
၆ ။ ။ လစ်ဘရယ်ပညာရှင် ဂေါင်လျှို.ကျီသည် ၁၉၇၉ခုနှစ်အတွင်း ပြည်သူ.နေ.စဉ်သတင်းစာ၌ ပြည်သူလူထုအား နိုင်ငံရေးအကြောင်းအရာများကို လွတ်လပ်စွာ ငြင်းခုန်ဆွေးနွေးခွင့်ပြုသင့်ကြောင်း အငြင်းပွါးဖွယ် ဆောင်းပါးတစ်စောင်ရေးသားခဲ့သည် ။ ဟူကျိဝေသည် သတင်းစာ၏ အယ်ဒီတာချုပ်ဖြစ်ပြီး ဝမ်ရူရှီက လက်ထောက်အယ်ဒီတာဖြစ်သည် ။ ဟူယောင်ဘန်းသည် တိန်.ပြောသလို သူတို.ကို ပြစ်ဒဏ်မခတ်သည့်အတွက် ဝေဖန်ခံခဲ့ရသည် ။
၇ ။ ။ အငြင်းပွါးဖွယ် ဒေသန္တရရွေးကောက်ပွဲတစ်ခုက ၁၉၈၆ခုနှစ်တွင် မြို.ကြီးပေါင်းများစွာ၌ ကျောင်းသားဆန္ဒပြပွဲများကို ပေါ်ပေါက်စေခဲ့သည် ။ ဆန္ဒပြသူများက နိုင်ငံရေးလွတ်လပ်ခွင့်ပိုမိုရရှိရန် တောင်းဆိုခဲ့ကြသည်။ သူတို.၏ ဆန္ဒပြမှုများက လစ်ဘရယ်အယူအဆရှိသည့် ပါတီခေါင်းဆောင် ဟူယောင်ဘန်းကို ရာထူးမှ အလျှင်အမြန် ဖယ်ရှားစေခဲ့သည် ။
၈ ။ ။ ဟူယောင်ဘန်းသည် တရုတ်ပြည် ကွန်မြူနစ်လူငယ်အဖွဲ.ချုပ်၏ ပထမအတွင်းရေးမှုးအဖြစ် အနှစ် ၂၀ ကျော်ကြာ တာဝန်ယူခဲ့သည် ။
၉ ။ ။ လေးဦးဂိုဏ်းမှာ ယဉ်ကျေးမှုတော်လှန်ရေးကာလအတွင်း အဓိကကျသည့် အာဏာနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ ဋ္ဌာနများကို ထိန်းချုပ်ကိုင်တွယ်ခဲ့သည့် ကွန်မြူနစ်ပါတီအတွင်းမှ လက်ဝဲစွန်းရောက် အုပ်စုကို ရည်ညွှန်းသုံးစွဲခြင်းဖြစ်သည်။
(ကျောက်ကျိယန်၏ Prisoner of the State စာအုပ်မှ Part4Chapter 1 Hu Yaobang “Resigns” ကို ဘာသာပြန်ဆိုထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။)
Posted by T2A at 4:36 PM
Maribel Artaste June 29, 2012 at 5:54 PM
ပေါ်လစ်ဗျူရိုအတွင်း စစ်ပွဲ ။ အခန်း ၁ (နိုင်ငံတော် အ...